ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: April 2012
ရေးသူ - Tulsathit Taptim
နေးရှင်းသတင်းစာ၊ ၂၅ ဧပြီ ၂၀၁၂
မြန်မာပြည်က ကျမ်းကျိန်းစာပြဿနာဟာ လူတိုင်းကိုယ်ပြောချင်သလိုပြောလို့ရတဲ့ ကိစ္စမျိုးဖြစ်နေလေတော့ ဒီဆောင်းပါးဟာ အဲဒီရေစီးကြောင်းကို ကန့်လန့်တိုက်ချင်တဲ့သဘောမျိုးမဟုတ်ပါ။
တကယ်လို့သာ သံခင်းတမန်ခင်းဆန်တဲ့ ယဉ်ကျေးပျူငှာစကားလုံးတွေနဲ့၊ နိုင်ငံရေးအရမှန်ကန်မှုတွေရဲ့ တားဆီးတုပ်နှောင်မှုသာမရှိခဲ့ရင် အရေးပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများအနေနဲ့ အောက်ပါအတိုင်း ပြောကြားလိမ့်မယ်လို့ ကျနော်ထင်မြင်မိပါတယ်။
ဝါရှင်တန်က အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးတယောက်ရယ်၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်(ဒီချုပ်)က ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူရယ်၊ အီးယူက ထိပ်တန်းကိုယ်စားလှယ်တယောက်ရယ် စကိုက်ပ်(Skype)ပေါ်မှာ တော်ကီပွားနေကြတယ်လို့ မြင်ယောင်ကြည့်လိုက်ပါ။
အိမ်ဖြူတော်အရာရှိ။…….။ ဘာတွေ ဖြစ်ပျက်နေတာတုန်းဗျ။
ဒီချုပ်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ။……။ ကျနော်တို့ ပါလီမာန်မှာ ကျမ်းကျိန်းစာ မဆိုဘူး။ ဒီကိစ္စက ရှင်းရှင်းလေးပါ။
အိမ်ဖြူတော်အရာရှိ။……….။ ကျုပ်သိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ခင်ဗျားတို့အနေနဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို လေးစားတော့ လေးစားနိုင်ပြီး ဘာကြောင့် မကာကွယ်မစောင့်ရှောက်နိုင်ရသလဲဆိုတာ ကျုပ်ကို ပြောပြစမ်းပါဦး။ ကျနော်မှားသွားရင် ထောက်ပြပေးပါ။ ခင်ဗျားအနေနဲ့ တစုံတခုကို လေးစားလိုက်နာတယ်ဆိုရင် အဲဒီအရာကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရမှာ သဘာဝမကျဘူးလားဗျာ။
ဒီချုပ်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ။………….။ လေးစားလိုက်နာခြင်းဆိုတာ တည်ရှိမှုကို အသိအမှတ်ပြုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်လည်း သက်ရောက်ပါတယ်။ ကျုပ်တို့ မဖြစ်မနေပြောချင်တာက အခြေခံဥပဒေကြီးတည်ရှိနေမှုကို ကျုပ်တို့ အရှိအတိုင်းလက်ခံတယ်၊ အဲဒါကြီးရှိနေမှုကို ကျုပ်တို့လည်း ဘာမှ မတတ်နိုင်ဘူး။ ဒါပေမယ့် အဲဒီ ဖွဲ့စည်းပုံကြီးကို အသေခံကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့တော့ ကျုပ်တို့ ဆန္ဒမရှိဘူး။
အိမ်ဖြူတော်အရာရှိ။………။ စံချိန်စံညွှန်းအတိုင်း တပြားသားမျှ မလျှော့တတ်တာကတော့ ကောင်းပါပေတယ်။ ဒါပေမယ့် ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ပတ်သက်လို့ စကားလုံးကအစ ဒီလောက်အကဲဆတ်တယ်ဆိုလည်း ဘာကြောင့် ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဝင်ပြိုင်ခဲ့သေးလဲဗျာ။ ဒီရွေးကောက်ပွဲကလည်း ဒီဖွဲ့စည်းပုံရဲ့ အထောက်အကူနဲ့ ကျင်းပခဲ့တာပဲ မဟုတ်ဘူးလား။ ဒီချုပ်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ။………..။ ထိုင်းနိုင်ငံက ပွာထိုင်းပါတီ (Pheu Thai Party)ကို ဘာကြောင့် ဖွဲ့စည်းပုံအသစ်ပြန်ရေးချင်ရသလဲလို့ သွားမေးကြည့်ပါ။ သူတို့လည်း သူတို့ မုန်းလှပါချည်ရဲ့ဆိုတဲ့ အခြေခံဥပဒေအောက်မှာပဲ အာဏာရလာခဲ့ကြတာပဲ။ အဲဒီမှာ ပိုကြီးမားတဲ့ ကမောက်ကမ အဖြစ်အပျက်ကြီး ဖြစ်နေတာကျတော့ ခင်များတို့ မမြင်မိဘူးလား။
အီးယူကိုယ်စားလှယ်။……..။ ဒီကိစ္စထဲ ထိုင်းကိုဆွဲမထည့်နဲ့လေ။ အခုလွှတ်တော်ကို ခင်ဗျားတို့သပိတ်မှောက်တာက ကျုပ်တို့မျက်နှာ အိုးမဲသုတ်သလိုပဲ။ ကျုပ်တို့မှာ ခင်ဗျားတို့ တိုင်းပြည်အပေါ်ချမှတ်ထားတဲ့ အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေကို လျှော့ချပေးမိလျက်သားတန်းလန်းဖြစ်နေပြီ။
ဒီချုပ်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ။……….။ ဒီမယ် လူကြီးမင်းတို့။ မလေးစားလို့မဟုတ်။ ဒါပေမယ့် ကျုပ်အမြင်ပြောရရင်တော့ ဒီလို အရေးယူပိတ်ဆို့မှု ဖယ်ပေးတာတွေ၊ အရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်တွေ လာလည်တာတွေ၊ မြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ခင်ဗျားတို့ချီးကျူးပြောကြားနေသမျှတွေဟာ စစ်အစိုးရနဲ့ပဲသက်ဆိုင်ပါတယ်။ စစ်အစိုးရက ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့သမျှ ခင်ဗျားတို့က ယုံကြတာကိုး။ ဒီတော့ ဒီဆန်ရှင်ကိစ္စ ကျုပ်တို့နဲ့ ဘာဆိုင်လို့လဲ။
အီးယူကိုယ်စားလှယ်။……..။ သြော်သြော်… ခင်ဗျားတို့ ဒီချုပ်ကတော့ စစ်အစိုးရပြောတာကို မယုံခဲ့တဲ့ အတိုင်းပဲ။ ခင်ဗျားတို့လည်း ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ်လေ။
ဒီချုပ်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ။……..။ သိန်းစိန်အတွက် ပန်းပွားက ကပေးမယ့်လူတွေ ခင်ဗျားတို့ကမ္ဘာအခြမ်းကနေ ကျုပ်တို့ဆီက ဟိုတယ်တွေ ပြည့်နှက်သွားမတတ် ချောင်းပေါက်အောင်လာခဲ့ကြတာတွေကိုကော ကျုပ် အစပြန်ဖော်ရမလား။ ခင်ဗျားတို့ပဲ ကျုပ်တို့ကို အချက်ပြတုန်းက ပြခဲ့ပြီးတော့။
အီးယူကိုယ်စားလှယ်။………။ ခင်ဗျားတို့ကလည်း အချက်ပြခဲ့ပါတယ်လေ။ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ ခေါင်းဆောင်ကြီး အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင် ပြောခဲ့တယ်လေ။ အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေ လျှော့ချခြင်းဟာ ခင်ဗျားတို့တိုင်းပြည်ထဲက ပြုပြင်ပြောင်းလဲသူတွေကို အထောက်အကူဖြစ်စေလိမ့်မယ်တဲ့။ အခုကျမှ ကျုပ်တို့ငွေကို ခင်ဗျားတို့ မလိုတော့ပါဘူး ပြောချင်နေတာလား။
ဒီချုပ်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ။………။ ဒါကတော့ ခင်ဗျားတို့ငွေ နောက်ဆုံး ဘယ်သူ့အိပ်ထဲ ရောက်သလဲဆိုတဲ့ အပေါ်မှာတော့ မူတည်တာပေါ့ဗျ။
အိမ်ဖြူအရာရှိ။………။ကဲ..ကဲ.. နှစ်ယောက်စလုံး တော်ကြတော့။ မြန်မာအရေးဟာ ကျဆုံးလို့မဖြစ်ဘူး။ အဲဒါ ကျုပ်တို့အတွက် အောက်ထစ် ရည်မှန်းချက်ပဲ။ သဘောပေါက်တယ်နော်။ အာဏာရှင် အောင်ပွဲခံသွားရင်..ကျုပ်တို့အားလုံး ရှုံးနိမ့်တာပဲ။
အီးယူကိုယ်စားလှယ်။……….။ ဒါဆိုလည်း ကျုပ်တို့ အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေကို ပြန်ပြဌာန်းလိုက်ရုံပေါ့။
အိမ်ဖြူအရာရှိ။…….။ အာ…ကျုပ်တို့အားလုံး သောက်ပေါ တွေ ဖြစ်ကုန်မှာပေါ့။ ကဲ.. ဒီကိစ္စ အလေးအနက်ထားကြရအောင်။ ကျုပ်တို့အားလုံး အခု အရမ်းနစ်နေပြီ။ တကမ္ဘာလုံးမှာ အုပ်စု နှစ်ခြမ်းကွဲနေတယ်။ တခြမ်းက မြန်မာပြည်အနာဂတ် လင်းလက်နေတယ်လို့ ပြောတဲ့အပေါ်မှာ ကျုပ်တို့ကို ယုံကြည်ထောက်ခံတဲ့ သူတွေ။ နောက်တခြမ်းက မြန်မာစစ်အစိုးရက ကျုပ်တို့ကို နှပ်ချလိုက်တာ၊ လှည့်ဖြားလိုက်တာကို ဟားဖို့ အသင့် စောင့်နေကြတဲ့လူတွေ။
ဒီချုပ်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ။………။ ဒါဆိုလဲ ခင်ဗျားတို့ဖက်က အလေးအနက်ရှိကြောင်း ကျုပ်တို့ကို ပြလေ။ စစ်အုပ်စုကို ကျမ်းကျိန်စာစာသား ပြောင်းဖို့ ပြော။ သူတို့ကို စာသားပြောင်းချင်ပြောင်း၊ မပြောင်းရင် နောက်ထပ် ငါးနှစ်စာ ပိတ်ဆို့မှုသက်တမ်းကို တိုးမြှင့်မယ်လို့ ပြောလိုက်။
အိမ်ဖြူအရာရှိ။………။ အဲလိုလုပ်ရင် စီးပွားရေးမြှုပ်နှံမယ့်လူတွေ အများအပြား နှလုံးသွေးရပ်သွားလိမ့်မယ်။ လုပ်ပါဗျာ။ ကျမ်းသစ္စာကို ကျိန်မှာသာ ကျိန်လိုက်ပါ။ ကျိန်ပြီး မေ့ပစ်လိုက်။ ဒီခေတ်ကြီးထဲမှာ ဘယ်သူမှ ကျမ်းကျိန်တာကို အရေးတယူ အလေးအနက်ထားနေကြတော့တာ မဟုတ်ဘူးဗျ။ နောက်ပြီး.. ပါလီမန်မှာ ခင်ဗျားတို့ အများစုအနိုင်ရတဲ့အချိန်ကျရင် ပြင်လိုက်လို့ရတာပဲဟာ။ အဲဒီအချိန်ရောက်ရင် ဘယ်လိုလုပ်ရသလဲဆိုတာ ထိုင်းတွေဆီက အကြံဥာဏ်တောင် ယူနိုင်သေးတယ်။
ဒီချုပ်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ။…..။ ထိုင်းတွေက သွေးထွက်သံယိုမဖြစ်ဘဲ လုပ်နိုင်မလားဆိုတာ သူ့တို့ဟာ သူတို့တောင် သေချာတာမဟုတ်ဘူး။
အိမ်ဖြူအရာရှိ။…….။ ကျုပ်ပြောချင်တာလည်း အဲဒီအချက်ပဲ။ ခင်ဗျား မမြင်ဘူးလား။ ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ အဖြစ်အပျက်ဟာ လူတွေ အလျှော့အတင်းမလုပ်နိုင်ကြတဲ့အခါမှာ ဘယ်လို ဖြစ်တတ်သလဲဆိုတဲ့ ပြယုဂ်တခုပဲ။ ခင်ဗျားတို့ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံရဲ့ အမှားတွေကို ခင်ဗျားတို့ ထပ်မလုပ်မိစေနဲ့။
ဒီချုပ်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ။……။ ဒီမိုကရေစီလိုချင်ရင် ခေါင်းမာဖို့တော့ လိုတယ်ဗျ။ တကယ်လို့ ပါလီမာန်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာပြီး ကျမ်းသစ္စာ ကျန်လိုက်ရင် ကျုပ်တို့ ရှုံးပြီ။ သစ္စာအဓိဋ္ဌာန်ဆိုတာ အင်မတန် အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စဗျ။ အနည်းဆုံးတော့ ခင်ဗျားတို့တိုင်းပြည်မှာတောင် အင်မတန်အရေးကြီးတယ်။
အီးယူ။……..။ ဘာ သစ္စာအဓိဋ္ဌာန်ပဲ ဆိုဆို၊ စစ်တပ်က အချိန်မရွေး အာဏာဝင်သိမ်းပြီး ခင်ဗျားတို့ကို ညောင်းတော့လို့ ပြောနိုင်တယ်။ အဲဒီအချိန်ကျရင် ခင်ဗျားတို့အတွက် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ် လေးစားလိုက်နာတာပဲဖြစ်ဖြစ် အရေးမပါတော့ဘူး။
အိမ်ဖြူအရာရှိ။……။ အဲဒါ မှန်တယ်။ မယုံရင် ထိုင်းတွေကို မေးကြည့်။
ဒီချုပ်ပြောခွင့်ရသူ။…….။ ထိုင်းမှာ ပြဿနာတွေတက်နေရတာကလည်း သူတို့ရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို သူတို့ သောက်ဂရု မစိုက်လို့ ဖြစ်နေကြတာဗျ။ ထိုင်းတွေဟာ သူတို့ရဲ့ ဥပဒေတွေကို အများလက်ခံတဲ့ တန်ဘိုးအနှစ်သာရတွေပေါ် အခြေခံစဉ်းစားတွေးခေါ်ကြတာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ သူတို့ကိုယ်ကျိုးအတွက်ရယ်၊ သူတို့ရန်သူတွေကို ခေါင်းမထောင်နိုင်အောင်ရယ် အမြင့်ဆုံးဥပဒေတွေကို ဟိုပြောင်းဒီပြောင်း ပြောင်းနေကြတာပဲ။
အိမ်ဖြူအရာရှိ။……။ ဘာလဲ… မြန်မာပြည်မှာတော့ အဲဒီလို မဟုတ်ဘူးလို့ ခင်ဗျားက ပြောချင်တာလား။ တကယ်လို့ အနာဂတ်မှာ အခြေခံဥပဒေကို ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင် စိတ်ကြိုက်ရေးဆွဲခွင့်ရပြီး အဲဒီအချိန် လွှတ်တော်ထဲက လူနည်းစုက လက်မခံဘူးဆိုရင်ကော....။
ဒီချုပ်။…… ။ သူတို့ကို အခြေခံဥပဒေကို လေးစားလိုက်နာပါလို့ ပြောလိုက်မှာပေါ့။ ဒါဆို ကိစ္စပြတ်ကရောပေါ့။
အိမ်ဖြူအရာရှိ။……။ မပြတ်ဘဲ ကျုပ်တို့ ပြောခဲ့တဲ့ အစကို တပတ်ပြန်လည်သွားနိုင်တယ်။ ဒီကနေ့ ဝေါလ်စထရိ ဂျာနယ်မှာ ရေးထားတာကို ခင်ဗျားဖတ်ပြီးပလား။ အယ်ဒီတာတွေ ဘာပြောသလဲဆိုတော့ ခင်ဗျားအနေနဲ့ သင်္ကေတပိုင်းဆိုင်ရာ ကိန်းကြီးခန်းကြီးအပြုအမူတွေ ပြည့်နေတဲ့ နိုင်ငံရေးမျိုးကို လုပ်ဖို့ မစွမ်းသာဘူးလို့ ပြောထားတယ်။ သူတို့က ဘယ်လိုတောင် ဟောကိန်းထုတ်လဲဆိုရင်…. ပိတ်ဆို့မှုတွေကလည်း ရုတ်သိမ်းနေတယ်၊ ခင်ဗျားတို့ကလည်း မှောက်ချည် လှန်ချည် လုပ်နေတယ် ဆိုရင် စစ်အစိုးရက ငွေထုပ်ပိုက်ရင်း အကြီးအကျယ် ဟားတိုက်ရယ်မောနေကိန်းရှိတယ်၊ ပြီးတော့ အတိုက်အခံတွေကို အရင်ကလိုပဲ ပြန်ပြီး နှိပ်ကွပ်ကိန်းရှိတယ်… ဆိုပြီး ပြောထားတယ်။
ဒီချုပ်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ။…..။ ခင်ဗျားတို့က ကျုပ်တို့ကို မယုံဘဲ စစ်အစိုးရအပေါ်မှာ ပုံပြီး လောင်းကြေးထပ်တာကိုးဗျ။ အခုကျမှ ခင်ဗျားတို့ အကျိုးစီးပွားဟာ ကျုပ်တို့တာဝန်ဆိုပြီး လာလုပ်နေတယ်။ ပြောစမ်းပါဦးဗျာ။ ဘယ်လိုကနေ ဘယ်လို…“စစ်အစိုးရကိုတိုက်၊ မင်းတို့နောက်မှာ ငါတို့ရှိတယ်” ဆိုတာကနေ “စစ်အစိုးရနဲ့ သင့်မြတ်အောင်နေပါ” ဆိုတဲ့အထိ ပြောင်းလဲသွားရသလဲဆိုတာ။
အီးယူကိုယ်စားလှယ်။…….။ ခင်ဗျားတို့ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဝင်ပြိုင်ခဲ့တယ်လေ။ အဲဒါ ဘယ်လိုပြောင်းသွားရသလဲဆိုတဲ့ အကြောင်းရင်းပေါ့။
ဒီချုပ်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ။……….။ ကျုပ်တို့ ရွေးကောက်ပွဲဝင်တာက အခြေခံဥပဒေကြီးကို အသက်ပေး ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပါမယ်လို့ ကျိန်ဆိုဖို့ ဝင်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။ ကျုပ်တို့ ဝင်ခဲ့တာက အဲဒီအခြေခံဥပဒေကြီးကို ပြစ်တင်ရှုံ့ချနိုင်ဖို့အတွက်ပဲ ဝင်ခဲ့တာ။
အိမ်ဖြူအရာရှိ။…….။ လေးစားလိုက်နာဖို့အတွက် ဆိုပါတော့။
ဒီချုပ်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ။………..။ ထင်ချင်သလို ထင်ဗျာ။
The right to respect but not protect
Posted by ကိုပေါ on Saturday, April 28, 2012
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ကလွတ်မြောက်လာပြီးနောက်ပိုင်း လက်ရှိအချိန်အထိ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ် ကျနော့်အမြင်ကို ရေးသားလိုက်ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ သမ္မတဦးသိန်းစိန် ပထမဦးဆုံးအကြိမ် စတင်တွေ့ဆုံစဉ်က စပြီး ရေတွက်ကြည့်ပါ။ ဒီကနေ့ ရက်ပေါင်း ၂၄၆ ရက် တင်းတင်းပြည့်ခဲ့ပါပြီ။ လ အရေအတွက်နဲ့ကြည့်ရင် ရှစ်လ စွန်းစွန်းရှိပါပြီ။ ဒီကြားထဲမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ဦးသိန်းစိန်နဲ့ ဒုတိယအကြိမ်ပင် ထပ်မံတွေ့ဆုံပြီးသွားပြန်ပါပြီ။ ဒါပေမယ့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ဦးသိန်းစိန်အကြားမှာ ဘာတွေဆွေးနွေးခဲ့သလဲ၊ ဘယ်လိုသဘောတူညီမှုတွေ ရခဲ့သလဲဆိုတာ ယနေ့အထိ ပြည်သူလူထုကို နှစ်ဖက်စလုံးက အမှောင်ချထားဆဲဖြစ်ပါတယ်။
အလားတူပဲ ဦးအောင်ကြည်နဲ့ ဒေါ်စုအကြား တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေမှာလည်း ယေဘုယျဆန်တဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်တွေကလွဲလို့ ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ ဘာတခုမှ သိခွင့်မရခဲ့ပါဘူး။ အတိတ်ခပ်လှမ်းလှမ်းကို ပြန်ကြည့်ပြန်ရင်လည်း ဦးခင်ညွန့်လက်ထက်က ဒေါ်စုနဲ့ စစ်အစိုးရအကြား ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ကြတဲ့ကာလမှာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတာတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ နှစ်ဖက်စလုံးက ရေငုံနှုတ်ပိတ်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။
စစ်အစိုးရဖက်က မပွင့်လင်းတာဟာ အံ့သြစရာမရှိပေမယ့် လူထုခေါင်းဆောင်လို့ သတ်မှတ်လို့ရတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဖက်က သူမကို ထောက်ခံတဲ့လူထုအပေါ် တခွန်းတပါဒ မပြောဘဲ ရေငုံနှုတ်ပိတ်နေတာဟာ ဒေါ်စုအနေနဲ့ လူထုကို မယုံကြည်လို့လား၊ ဒါမှမဟုတ် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေမှာ ပြည်သူကို ချပြလောက်စရာ လောက်လောက်လားလား အကျိုးရလဒ်တွေ ရအောင် မစွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့လို့လားဆိုတာ တွေးစရာဖြစ်လာပါတယ်။
တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေရဲ့ အစပိုင်းကာလမှာ ဒေါ်စုက ပြည်သူလူထုကို ထိုက်သင့်တဲ့အချိန်မှာ ဘာတွေ ဆွေးနွေးခဲ့သလဲဆိုတာ အသိပေးမယ်လို့ (ပထမဆုံး ပဲခူးခရီးစဉ်အတွင်းမှာ) ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။ နောက်တခါ ဗီအိုအေ ဒေါ်ခင်စိုးဝင်းနဲ့ တွေ့ဆုံစဉ်က ပြည်သူကို ဖွင့်ပြောဖို့ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး...“ဒီကိစ္စမျိုးဆိုတာ ရေရှည်အချိန်ဆွဲထားလို့ မကောင်းဘူး။ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ ပြည်သူလူထုရဲ့ ယုံကြည်မှု ကျဆင်းလာနိုင်ပါတယ်” ဆိုတဲ့သဘောမျိုး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင် ထုတ်ပြောခဲ့ပါတယ်။ အဖွဲ့ချုပ်က ဦးဝင်းတင်ရဲ့ အင်တာဗျူးတွေမှာ ပြောစကားအရ "ဒေါ်စုက အချိန်ကာလ တခုတောင်းတယ်။ အဲဒီကာလ လွန်မြောက်ရင် သူမှားရင်လည်း ဒေါ်စုက တာဝန်ယူမယ် ဆိုတာမျိုး ပြောခဲ့ပါသတဲ့။”
ဒါပေမယ့် အရေးကြီးတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေဖြစ်တဲ့ အင်န်အယ်လ်ဒီပါတီအနေနဲ့ မှတ်ပုံတင်ဖို့၊ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေသာ ချမှတ် အကောင်အထည်ဖော်သွားတယ်၊ ဒီကနေ့အထိ ဒေါ်စုဟာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြည်သူအပေါ် ကတိမတည်ပဲ နှုတ်ဆိတ်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအချက်ဟာ ဒေါ်စုအတွက်ရော၊ တိုင်းပြည်အတွက်ပါ ကောင်းတဲ့ အလားအလာတော့ မဟုတ်ပါ။ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေရဲ့ ရလဒ်ဟာ အမှန်တကယ်ကောင်းမွန်တဲ့ ရလဒ်သာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ဒေါ်စုအနေနဲ့ ပြည်သူလူထုအပေါ်မှာ ဘာမှ ထိန်ချန်စရာအကြောင်းမရှိလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒေါ်စု ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရတဲ့အကြောင်းသုံးချက်ထဲမှာ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး နဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးဆိုတဲ့ အချက်သုံးချက်ကို ဦးစားပေးဖော်ပြထားပေမယ့် ဒီအချက်တွေကို ဘယ်ပုံဘယ်နည်းဖော်ဆောင်မယ်၊ ဘယ်အချိန်မှာ ဘယ်အဆင့်ကို ရောက်ဖို့ရည်မှန်းတယ်၊ ဘယ်လောက်ကြာမယ် စတဲ့ လမ်းစဉ်အဆင့်ဆင့်နဲ့ အချိန်ဇယားတွေကို ပြည်သူအများ နားလည်အောင် တိတိကျကျ ရှင်းလင်းထုတ်ပြန်ခြင်းမျိုးမရှိခဲ့ပါဘူး။ ( ဖေ့စ်ဘွတ်ပေါ်က ဒေါ်စုရဲ့ အမာခံပရိသတ်ကတော့ ဒီသုံးချက်ကိုတောင် ရေရေရာရာ သိရှာကြပုံ မရပါဘူး။ အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ မေးလိုက်တိုင်း ဝေဝါးနေကြတာကို သတိထားမိပါတယ်။)
ဖွဲ့စည်းပုံကို ပြင်ဆင်ရာမှာလည်း ယေဘုယျအားဖြင့် လွှတ်တော်တွင်းကို ဝင်ရောက်ပြီး လွှတ်တော်တွင်းမှာရှိတဲ့ မတူညီတဲ့ အင်အားစုတွေအကြား ဝင်ရောက်စည်းရုံးပြီး ပြင်ဆင်သွားမယ်လို့ ပြောသွားပေမယ့် ဘယ်လို အခက်အခဲတွေရှိပြီး၊ အဲဒီအခက်အခဲတွေကို ဘယ်ပုံဘယ်နည်းကျော်လွှားမယ်ဆိုတာကို ရေရေရာရာ ချပြနိုင်ခြင်းမရှိပါ။ အခုအထိ ပြောခဲ့တဲ့ မိန့်ခွန်းတွေ၊ ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရ အနှစ်ချုပ်ကြည့်ရင် အဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့ “ရလိုရငြား ဝင်ပြီး ကြိုးစားကြည့်မယ်” ဆိုတဲ့ သဘောသဘာဝထက် မပိုတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
ဘယ်အရာမှာမှ စိုက်လိုက်မတ်တတ် ပြီးမြောက်အောင်မကြိုးစားပဲ နည်းတခုမအောင်မြင်တိုင်း နောက်တနည်း ပြောင်းစမ်းကြည့်ကြဦးစို့ ဆိုသလို တိုင်းပြည်ကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည့်ရဲ့ နိုင်ငံရေးလက်တည့်စမ်းစရာတခုအဖြစ် သတ်မှတ်တာမျိုး မဖြစ်သင့်ပါ။ တိုင်းပြည်နစ်နာလှပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေအိမ်အကျယ်ချုပ်က လွတ်မြောက်လာကာစက ဒေါ်စုနဲ့ သူမရဲ့ ပါတီ (အင်န်အယ်လ်ဒီ)ကို တကွဲစီဖြစ်အောင် စစ်အစိုးရကြိုးပမ်းနေတယ်ဆိုတဲ့ အသံမျိုးတွေ၊ စိုးရိမ်ပူပန်မှုမျိုးတွေ ရှိခဲ့ကြတာကို သတိရမိပါတယ်။ ဒီကြားထဲမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တိုင်းရင်းသားအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ စစ်အစိုးရဆီ အိတ်ဖွင့်ပေးစာတစောင်ရေးသားခဲ့ရာမှာ ပါတီကို ကိုယ်စားမပြုဘဲ သူမတဦးတည်းအနေနဲ့ ရေးသားတဲ့အခါ သို့လော၊ သို့လောတွေ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
နောက်ပိုင်း စစ်အစိုးရနဲ့ ဒေါ်စုအကြားတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေ ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာလည်း ဒေါ်စုဟာ ပါတီကို ကိုယ်စားမပြုဘဲ တကိုယ်တော်သွားရောက်တွေ့ဆုံ၊ ဆွေးနွေး၊ ဆုံးဖြတ်တာတွေကို မြင်လာရတဲ့အခါ စစ်အစိုးရအနေနဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီကို ဘေးချိတ်ပြီး ဒေါ်စုတယောက်တည်းကိုသာ ဖဲ့ထုတ်ယူဖို့ ကြိုးစားယူနေတယ်ဆိုတဲ့ အမြင်မျိုးတွေ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးကိုစောင့်ကြည့်အကဲခတ်သူတွေအကြားမှာ ကြီးထွားလာခဲ့တာကို သတိထားမိပါတယ်။
ဒေါ်စုအနေနဲ့လည်း တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေအကြောင်း ပါတီရဲ့ စီအီးစီ အဖွဲ့ဝင်တွေကိုတောင် အသိမပေးတဲ့အတွက် စီအီးစီအဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်ကြတဲ့ ဦးဝင်းတင်၊ ဦးဥာဏ်ဝင်းတို့အနေနဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ သူတို့ဘာမှ မသိကြောင်း မီဒီယာတွေမှာ ပြောဆိုဝန်ခံခဲ့တာတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။
စစ်အစိုးရက ဒေါ်စုနဲ့ ပါတီကို ခွဲဖို့ကြိုးစားတာ ဟုတ်မဟုတ် မသေချာပေမယ့် ဒေါ်စုရဲ့ လုပ်ပုံကိုင်ပုံ ပြုမူပုံကြောင့် ပါတီရဲ့ စီအီးစီနဲ့ဒေါ်စု ကင်းကွာနေခဲ့တာကတော့ အမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအတောအတွင်းမှာ ဒေါ်စုရဲ့ ပါတီတွင်း ပြမူဆောင်ရွက်ပုံတွေဟာ အဖွဲ့အစည်းပုံစံထက် အာဏာရှင်ဆန်နေတာကို အကဲခတ်မိပါတယ်။ ပါတီကို မှတ်ပုံတင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီး ပါတီဖွဲ့စည်းပုံကို ပြင်ဆင်ကာ ဥက္ကဋ္ဌနဲ့ အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ ပုံစံမျိုး ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းလိုက်ချိန်မှာ ဒေါ်စုနဲ့ (မှတ်ပုံမတင်မီ)မူဝါဒပိုင်းအရ ကွဲလွဲခဲ့ဖူးတဲ့ ဦးဝင်းတင်ကို နာယက အဖွဲ့ထဲကို ထည့်သွင်းလိုက်တာကို တွေ့ရပါတော့တယ်။
ပါတီတွင်း ဒီမိုကရေစီမရှိဘဲ ပါတီခေါင်းဆောင်တဦးတည်းသဘောနဲ့ ဆုံးဖြတ်လုပ်ကိုင်နေရင် ပါတီဟာ အနှေးနဲ့အမြန် ကျဆုံးနိုင်ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ သူမပြောခဲ့တာတွေကနေ ဂငယ်ကွေ့ကွေ့ပြီး ဆန့်ကျင်ဖက်ကို ပြောင်းပြန်လျှောက်တဲ့ လုပ်ရပ်မျိုးဟာ မဆန်းတော့ပါဘူးလို့ ပြောရလောက်အောင် ထပ်တလဲလဲဖြစ်ပွားခဲ့တာကို တွေ့ရပါတယ်။
ပထမဦးဆုံးနဲ့ အကြီးမားဆုံး ပြောင်းလဲမှုကြီးကတော့ “မတရားတဲ့ အမိန့်အာဏာမှန်သမျှ တာဝန်အရ ဖီဆန်ကြ” ဆိုတဲ့ ကြွေးကြော်သံကနေ... “စစ်အစိုးရနဲ့မတူတာဘေးဖယ် တူတာတွဲလုပ်”ဆိုတဲ့ မူအထိ ပြောင်းလဲသွားခြင်းပါ။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်စတင်ထူထောင်စဉ်က စစ်အာဏာရှင်စနစ် မြန်မာ့မြေပေါ်ကနေ အပြီးတိုင် ပပျောက်စေရေး မူကို လက်ကိုင်ထားခဲ့ပေမယ့် အခု “မတူတာဘေးဖယ် တူတာတွဲလုပ်ပြီး ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည့်ပုံအောက်ခေါင်းလျှိုဝင်လိုက်တဲ့အခါ” မှာ အနာဂတ်မြန်မာ့နိုင်ငံရေးမှာ တပ်မတော်က ဦးဆောင်အခန်းကဏ္ဍက ပါဝင်ရမယ်ဆိုတာကို သဘောတူခွင့်ပြုလိုက်ရာရောက်တဲ့အတွက် မူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာမှာ ၁၈၀ ဒီဂရီ ချိုးကွေးလိုက်တဲ့ အပြောင်းအလဲကြီးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီပြောင်းလဲမှုကြီးအပေါ်မှီတည်ပြီး ရွှေဂုံတိုင်ကြေညာစာတမ်းကနေ ဂငယ်ကွေ့ ချိုးကွေ့ခဲ့ပါတယ်။ မှတ်ပုံတင်စရာမလိုဘူး၊ ရွေးကောက်ပွဲ မဝင်ဘူးလို့ အော်ခဲ့ရာကနေ မှတ်ပုံတင်မယ်၊ ရွေးကောက်ပွဲလည်း ဝင်မယ်အထိ နှစ်နှစ်အတွင်းမှာ ပြောင်းလဲခဲ့ပြန်ပါတယ်။
တခါ ရွေးကောက်ပွဲမဲဆွယ်တဲ့မိန့်ခွန်းမှာ စစ်ဖက်ကိုယ်စားလှယ် ၂၅% လွှတ်တော်ထဲမှာ ပါဝင်မှုဟာ ဒီမိုကရေစီမကျဘူး၊ ဒီမိုကရေစီနဲ့ မကိုက်ညီတာတွေကို ပြင်ဆင်မယ်၊ ဖယ်ထုတ်မယ်” ပြောခဲ့ပြီး ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ “၂၅%ကို ကျမ ဖယ်ထုတ်မယ်လို့ ဘယ်တုန်းကမှ မပြောခဲ့ပါဘူး” လို့ ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း ငြင်းဆိုတာတွေ လုပ်ခဲ့တာကို တွေ့ရပါတယ်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ ကျမ်းသစ္စာစာသားကြောင့် လွှတ်တော်တက်မတက်ကိစ္စမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ဦးဥာဏ်ဝင်းတို့ တောင်ပြောမြောက်ပြောလုပ်နေတာတွေဟာ သူတို့ကို ထောက်ခံသူတွေအကြားမှာပင် ရှုပ်ထွေးမှုများ၊ သဘောထားကွဲလွဲမှုများ ဖြစ်ပေါ်စေတာကို တွေ့မြင်နေရပါတယ်။
ခြုံကြည့်ရင် ဒေါ်စုရဲ့ မူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာမှာ အပြောင်းအလဲမြန်မှု၊ စကားကို ခုတမျိုး တော်ကြာတမျိုး ပြောင်းလဲပြောတတ်မှုတွေဟာ သူ့ကို ထောက်ခံသူတွေအကြားမှာရော၊ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးလောကတခုလုံးမှာပါ ရှုတ်ထွေးမှုတွေ၊ မလိုအားအပ်တဲ့ ကွဲလွဲမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်စေပါသေးတယ်။ မီဒီယာတွေနဲ့ စကားမပြောမီမှာ ဒေါ်စုကို ပေါ်လစီပိုင်းဆိုင်ရာ အကျဉ်းချုပ် အစီရင်ခံသူ(briefing) အကြံပေးတဦး ထားသင့်တယ်လို့ ယူဆပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ အင်အားစုတွေကို အမှန်တကယ် စုစည်းပေးနိုင်ရဲ့လား
ဒေါ်စုလွတ်မြောက်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာ ညံလာတဲ့အသံတွေအနက် “ဒီအချိန်မှာ ညီညွတ်ဖို့လိုတယ်၊ အဖွဲ့ချုပ်နဲ့ ဒေါ်စုကို ဝန်းရံရမယ်” ဆိုတဲ့ အသံဟာ အကျယ်လောင်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ညီညွတ်ဖို့လိုတာကို အငြင်းပွားဖွယ်မရှိပေမယ့် ဘာအတွက် ညီညွတ်ကြမှာလဲ။
ကျနော်တို့ဟာ စစ်တံပိုးအောက်ကနေ ရုန်းထွက်လွတ်မြောက်ဖို့မှာ ညီညွတ်ကြမယ်။ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ညီညွတ်ကြမယ်။ တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် ညီညွတ်ကြမယ်။ ဒါတွေအတွက် ကွဲလွဲစရာမရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် စစ်ကျွန်သက်ကို ရှည်အောင်လုပ်တဲ့နေရာမှာ ကျွန်ဝယ်ရာ အဆစ်ပါသလို ကိုယ်ပါလိုက်ပြီး ညီညွတ်စရာမလို။ ဝန်းရံစရာမလို။ စစ်အာဏာရှင်နဲ့ မတူတာဘေးဖယ် တူတာတွဲလုပ်တဲ့ကိစ္စတွေမှာ ညီညွတ်စရာ၊ ဝန်းရံစရာမလို။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ စစ်အစိုးရနဲ့ ဖိနှိပ်ခံတွေအကြားမှာ ဘုံအကျိုးတူညီချက် မရှိလို့ဘဲ။
ဒါ့အပြင် တိုင်းရင်းသားတွေအပေါ်ထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့ကိစ္စတွေ၊ အလုပ်သမားတွေ လုပ်ခအနှိမ်ခံရတဲ့ကိစ္စ၊ လယ်သမားတွေ လယ်သိမ်းခံရတဲ့ကိစ္စ၊ ဘာသာခြားလူနည်းစုတွေ ဖိနှိပ်အနိုင်ကျင့်ခံရမှုကိစ္စတွေမှာ ဒေါ်စုအနနဲ့ အဖိနှိပ်ခံဖက်က မရပ်တည်ဘဲ နှစ်ဘက်စလုံးကို သဘောထားကြီးဖို့ ကြားဝင်တိုက်တွန်းမှုတွေဟာ အဖိနှိပ်ခံတွေအတွက် အားတက်စရာ ဖြစ်မလာသလို သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းရင်းသားနဲ့ လူနည်းစု ဘာသာခြားတွေရဲ့ ယုံကြည်ကိုးစားမှုကို လျော့ကျစေပါတယ်။
စစ်မှန်တဲ့လူထုခေါင်းဆောင်တယောက်ဟာ လူထုကြုံတွေ့နေရတဲ့ ပြဿနာအဝဝကို နေ့ညမဆိုင်း လူထုဖက်က ဝင်ရပ်ပေးလေ့ရှိပါတယ်။ လွှတ်တော်ထဲရောက်မှ၊ ဥပဒေပြင်ပြီးမှ၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှ စသဖြင့် နေ့ရွှေ့ညရွှေ့ အချိန်ဆွဲနေလို့မရပါ။
ပြည်သူ့အသံ အစစ်အမှန်ကို နားထောင်ပါ...
ဒေါ်စုလွတ်လာကာစက ပြည်သူအသံကို နားထောင်ချင်ပါတယ်လို့ ပြောခဲ့ဖူးတာရှိပါတယ်။ ပြည်သူ့အသံအစစ်အမှန်ဟာ.. ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပေါ်မှာ တွေ့ရလေ့ရှိတဲ့ “အမေက ကျက်သရေရှိလိုက်တာ၊ လှလိုက်တာ” ဆိုတဲ့ ပေါ့ပျက်ပျက် အသံမျိုးတွေ မဟုတ်သလို၊ ဒေါ်စုအနီးမှာ လက်ရှိဝန်းရံနေကြတဲ့ ဗောင်းတော်ညိတ်၊ စိတ်တော်သိ အပါးတော်မြဲတွေရဲ့ မင်းလိုလိုက်၊ မင်းကြိုက်ဆောင်တဲ့ အောက်ခြေနဲ့ ကင်းကွာနေတဲ့ အသံတွေလည်း မဟုတ်ပါ။
တိုင်းရင်းသားတွေ အပါအဝင် အလုပ်သမား၊ လယ်သမား၊ ကျောင်းသား၊ ရဟန်း၊ ဘာသာခြားစတဲ့ ပြည်သူပေါင်းစဉ် တွေ့ကြုံခံစားနေရတဲ့ လူမှုဒုက္ခအဝဝနဲ့ ဖိနှိပ်မှုတွေကို မခံနိုင်လို့ ရင်တွင်းက ပွင့်ထွက်လျှံကျလာတဲ့အသံတွေသာလျှင် ပြည်သူ့အသံစင်စစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို ပြည်သူ့အသံတွေကို မသိကျိုးကျင်ပြုမယ့်အစား ဖိနှိပ်ခံပြည်သူဖက်က မားမားမတ်မတ် ရပ်တည်ပြောဆိုပေးမယ်ဆိုရင် ပြည်သူ့အသံကို အမှန်တကယ် နားထောင်ရာ ရောက်ပါလိမ့်မယ်။
ဒီမှတ်စုကို ဖေ့စ်ဘွတ်ပေါ်မှာ ဘလော့ဂါမိတ်ဆွေတယောက်ရေးသားတဲ့ မှတ်ချက်ကလေးနဲ့ အဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်။
"နောက်ဆုံးမှာ နားလည်လိုက်တာကတော့ NLD လွှတ်တော် တက်ရင်လည်း အကြောင်းပြချက် မရမက ရှာပြီး ထောက်ခံကြမယ်။ လွှတ်တော် မတက်ဘူး ဆိုရင်လည်း အကြောင်းပြချက် မရမက ရှာပြီး ထောက်ခံကြမယ်။ ကိုယ်ပိုင် ယုံကြည်ချက် ခံယူချက် ဆိုတာ ရေရေ ရာရာ မရှိဘူး။ NLD လုပ်သမျှ အကုန်အကောင်း။ စေတနာနဲ့ လုပ်တာ မှားရင် မှားပါစေ ဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုး။ စေတနာနဲ့ လုပ်တာပေမယ့် မှားရင် တစ်နိုင်ငံလုံး မြောင်းထဲ ရောက်သွားမယ် ဆိုတာ မစဉ်းစားမိကြဘူးလား။ ကိုယ်တွင် မက ကိုယ့်မျိုးဆက်ပါ ဒုက္ခရောက်သွား နိုင်တယ် ဆိုတာ ထည့်မစဉ်းစား ကြဘူးလား။ မှားနေတယ် ထင်ရင် ထောက်ပြဖို့ မကြိုးစားရဲ ကြဘူးလား။ ကိုယ့်ယုံကြည်ချက် ကိုယ့်ခံယူချက်ကို ထုတ်မပြောရဲကြဘူးလား။ မြည်းတွေလို ရှေ့ဆုံးက မြည်းက ချောက်ထဲ ဆင်းရင် နောက်က တသီတတန်းကြီး လိုက်ဆင်းကြမှာလား။"
Posted by ကိုပေါ on Saturday, April 21, 2012
ဗမာပြည်ကို သိမ်းပိုက်ကြ Occupy Burma! အပိုင်း ၂
အပိုင်း ၁ ရဲ့ အဆက်
ဒီမိုကရေစီဆိုတာ အရင်းရှင်စနစ်ကို ပြောတာမဟုတ်
ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူတွေ ဒီမိုကရေစီ အစစ်အမှန်ကို လိုချင်တယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ဖာသာ လုပ်ယူရမှာပဲ။ ပြည်ပကို အားကိုးလို့ မရသလို NLD တခုတည်းကို ပုံအပ်ထားလို့လည်း မဖြစ်တော့ဘူး။ ဗမာပြည်သူတွေအတွက် စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီကို လိုချင်တယ်ဆိုရင် အလုပ်သမားလယ်သမားအရေးကို အကာအကွယ်ပေးဖို့ သိပ်အရေးကြီးတယ်။ အလုပ်သမား၊ လယ်သမားကို အကာအကွယ်မပေးဘဲနဲ့ ဒီမိုကရေစီ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ အပစ်အခတ်မရပ်ဘဲ ဒီမိုကရေစီ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ဒါဟာ ဗမာပြည်ရဲ့ ဘဝပေးအခြေအနေပဲ။
ကျွန်တော်တို့ လိုချင်တဲ့ ဒီမိုကရေစီဆိုတာဟာ အလုပ်သမား၊ လယ်သမားတွေ အားလုံးခံစားခွင့် ရှိမယ့် ဒီမိုကရေစီ ဖြစ်ရမယ်။ တိုင်းရင်းသားတွေ အားလုံးခံစားခွင့်ရှိမယ့် ဒီမိုကရေစီ ဖြစ်ရမယ်။ အလုပ်သမားတွေ၊ လယ်သမားတွေ မပါတဲ့ ခရိုနီ ဒီိမိုကရေစီဆိုတာဟာ ဒီမိုကရေစီ မမည်ဘူး။ ဒီမိုကရေစီဆိုတာဟာ အများပြည်သူရဲ့ အကျိုးစီးပွားကို ကိုယ်စားပြု ရလိမ့်မယ်။ အရင်းရှင်စနစ်ဟာ ဒီမိုကရေစီ မဟုတ်ဘူး။ အရင်းရှင် ဒီမိုကရေစီ ဆိုတာဟာ ဒီမိုကရေစီ မဟုတ်ဘူး။
ဒါပေမဲ့ စစ်အာဏာရှင်နဲ့ NLD တို့လက်တွဲပူးပေါင်းပြီး စစ်တပ်စိုးမိုးတဲ့ အရင်းရှင် အာဏာရှင်စနစ်သစ်ဆီ ဦးတည်သွားဖို့ လိုလားနေသူ မျှော်မှန်းနေသူတွေလည်း အများအပြားရှိကြတယ်။ အခုဆိုရင်ပဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အာဏာရလာမယ်ထင်ပြီး ခရိုနီတွေဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ကပ်လာတာတွေ့ရတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကလည်း အကပ်ခံတာကို မြင်နေရတယ်။ အင်္ဂလိပ်ခေတ်မှာ အင်္ဂလိပ် အလိုတော်ရိလုပ်သူတွေဟာ ဂျပန်ခေတ်ရောက်တော့ ဂျပန်ကို ပြေးကပ်ပြီး ဂျပန်စကားပြန်လုပ်တဲ့ အလုပ်မျိုးကို အခုလည်း ငို့ဘသမားတွေ လုပ်လာကြတာ မြင်လာရတယ်။ အရင်က အဘ၊ အဘ နဲ့ မရှက်မကြောက်ဖားခဲ့သူတွေဟာ အခုလည်း အမ၊ အမနဲ့ မရှက်မကြောက်ထဘီနားဆွဲရမှာကို ဝန်မလေးကြဘူး။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အိမ်ခြံစည်းရိုးကို ဘယ် ခရိုနီက ကာပေးလိုက်တယ်ဆိုတာမျိုး၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် စည်းရုံးရေး ဆင်းဖို့ လေယာဉ်စင်းလုံးငှားပေးတယ်ဆိုတာမျိုး၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို သိန်းဘယ်နှဆယ်တန် ထဘီလက်ဆောင်ပေးတယ် ဆိုတာမျုိးတွေကို ကြားလာရတယ်။ ကျွန်တော် သူဌေးမောင်ဘယ်သူဟာ အခုမှ မဟုတ်၊ ဘယ်တုန်းကတည်းက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ထောက်ပံ့ခဲ့ဖူးပါတယ်ဆိုတဲ့ အပြောမျိုးတွေ ပြောလာကြသူတွေကိုလည်း ကြားရရဲ့။ ဒါမျိုးတွေဟာ ဒေါ်စုနောက်အစိုးရဖြစ်လာရင် ခရိုနီလုပ်ချင်သူတွေရဲ့ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ဆိုတာ စီးပွားရေးပညာ တတ်ဖို့တောင်မလိုပါဘူး၊ ရန်ကုန်မှာ အိမ်ပွဲစား၊ ကားပွဲစားလောက်လုပ်ဖူးသူတွေတောင် နောကြေနေအောင် နားလည်ပါတယ်။
စစ်အစိုးရဘက်ကတော့ သူတို့ချည်း စားသောက်နေရာက၊ NLD ထိပ်သီးပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ NLD ခရိုနီသစ်တွေကိုပါ နည်းနည်းပါးပါး ခွဲဝေမျှပြီး ကျွေးလိုက်ရင် သူတို့ရဲ့ အာဏာသစ်ဟာ နှစ်ပေါင်း ငါးဆယ် တရာ ဆက်လက်တည်မြဲနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ထားကြပုံရ ပါတယ်။ NLD ဟာ စစ်အစိုးရဘက်က လုပ်လာမယ့် အဲဒီ အပေးအယူမျိုးကို သဘောတူမတူ၊ လက်ခံမခံဆိုတာကိုတော့ အချိန်နည်း နည်းယူပြီး ဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်ရဖို့ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲသလို အလားအလာမျိုးဆီ ဦးတည်နေတဲ့ ရှေ့ပြေးအရိပ်လက္ခ ဏာ တချို့ကိုတော့ ကျွန်တော်တို့ တွေ့မြင်နေရပါပြီ။ NLD ဟာ ဒီမိုကရေစီပါတီအဖြစ်ကနေ အခွင့်ထူးခံပါတီတခု ဖြစ်သွားမသွားဆိုတာ ပြည်သူတွေရဲ့ ဖိအား၊ ပြည်သူတွေရဲ့ ထိန်းကျောင်းမှု အပေါ်မှာလည်း အများကြီးမူတည်သလို၊ NLD မှာ နောက်မျိုးဆက်ခေါင်းဆောင် ကောင်း ထွက်လာမလာဆိုတဲ့ အချက်ပေါ်လည်း မူတည်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ လိုချင်တဲ့ ဒီမိုကရေစီဆိုတာ ပြည်သူ့လက်ထဲမှာ အာဏာရလာဖို့၊ လွတ်လပ်ခွင့်တွေ ရလာဖို့ ၊ ပြည်သူတွေ စားဝတ်နေရေး ချောင်လည်ဖို့ ဖြစ်တယ်။
ကျွန်တော်တို့ လိုချင်တဲ့ ဒီမိုကရေစီဟာ နှောင်ကြိုးမဲ့ အရင်းရှင်စနစ် unfettered capitalism မဟုတ်ဘူး။ အများပြည်သူကို လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကြီး မတရား သွေးစုပ်ခိုင်းစေနိုင်တဲ့စနစ်ကို ကျွန်တော်တို့ လိုလားတာမဟုတ်ဘူး။ အဲသလို ဒီမိုကရေစီမျိုး ထွန်းကားလာရင် စစ်အစိုးရနဲ့ ပေါင်းတဲ့ ခရိုနီကြီးတွေ၊ အတိုက်အခံNLDကို ကပ်ဖားရပ်ဖားလုပ်နေတဲ့ ခရိုနီဟောင်း၊ ခရိုနီသစ်တွေလောက်ပဲ အကျိုးရှိပြီး အများစု ပြည်သူကြီးက လည်စင်းပေးရလိမ့်မယ်။
စစ်ကျွန်ဘဝမှ နင်းပြားဘဝသို့ သွားမည်လော
ကမ္ဘာမှာ နိုင်ငံတကာ ငွေကြေးရန်ပုံငွေ အဖွဲ့ IMF ၊ ကမ္ဘာ့ဘဏ် World Bank တို့ရဲ့ ဆောင်ရွက်ချက်တွေကို လူထုကိုယ်စားပြုတဲ့ သူတွေက ဆန့်ကျင် ဝေဖန်နေကြတယ်။ ဆီယယ်တဲလ် လှုပ်ရှားမှု အပါအဝင် Wold Bank, IMF, WTO တို့ကို ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်တဲ့ ဆန္ဒပြပွဲ တွေ၊ G8၊ G20 ကို ဆန့်ကျင်တဲ့ ဆန္ဒပြပွဲတွေ၊ သိမ်းပိုက်ရေး (occupy) လှုပ်ရှားမှုတွေကို ကြည့်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာတော့ အစိုးရကရော၊ အတိုက်အခံကပါ IMF နဲ့ World Bank တို့ဆီက အကူအညီရရေးကို အရူးအမူးတောင်းဆိုနေကြပါတယ်။ ဒီတော့ အကျိုးဆက်က ဘာတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါသလဲ။
တကယ်တော့ IMF ၊ World Bank ရဲ့အကူအညီကို မယူရမဟုတ်။ ယူနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မူရှိဖို့လိုတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ကာကွယ်ထားနိုင်ဖို့ လိုတယ်။ ကိုယ့်နိုင်ငံက အလုပ်သမား၊ လယ်သမားတွေ ကို အကာအကွယ်ပေးဖို့လိုတယ်။ အကာအကွယ်ပေးတဲ့ ဥပဒေတွေ ပြဌာန်းထားဖို့ လိုပါတယ်။ ဘာ့ကြောင့် IMF ၊ World Bank ရောက်လာရင်၊ ပြည်ပ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေရောက်လာရင် အလုပ် သမား၊ လယ်သမားကို အကာအကွယ်ပေးဖို့ လိုသလဲဆိုတော့ IMF ၊ World Bank ဟာ လယ်သမားနဲ့ အလုပ်သမားတွေ ဒုက္ခရောက်သွားစေနိုင်တဲ့ စီးပွားရေး မူဝါဒအပြောင်း အလဲတွေ လုပ်ဖို့ရာ အစိုးရကို အကြပ်ကိုင်တတ်လို့ပါ။ အဲသလို အကြပ်ကိုင်ခဲ့ဖူးတဲ့ အစဉ်အလာတွေ ရှိခဲ့လို့ပါ။
IMF ၊ World Bank ဟာ သူတို့ ငွေကို ထုတ်ချေးတော့မယ်ဆိုရင် သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးကို သူတို့ လိုသလို ပြောင်းခိုင်းတယ်။ သူတို့ ကော်ပိုရေးရှင်းကြီးတွေရဲ့ ပစ္စည်းတွေကို အဟန့်အတား မရှိ ရောင်းချနိုင်အောင် စာချုပ်ချုပ်တယ်။ သူတို့ ဝယ်ချင်တဲ့ ပစ္စည်းကို အကန့်အသတ်မရှိ ဝယ်လို့ရအောင် စာချုပ်ချုပ်တယ်။ အဲဒီတိုင်းပြည်မှာ လုပ်ခဈေးချိုအောင် ဖန်တီးတယ်။ အလုပ်သမားအင်အား တိုးပွား လာအောင်လုပ်တယ်။ လယ်သမားတွေ အလုပ်သမားဖြစ်ကုန်အောင်လုပ်တယ်။ လယ်မြေတွေ ကုမ္ပဏီတွေလက်ထဲ ရောက်သွားအောင်လုပ်တယ်။ IMF ၊ World Bank ရောက်လာပြီးတဲ့ နောက် ဖွံ့ဖြိုးဆဲ နိုင်ငံတွေမှာ လယ်သမားတွေ၊ အလုပ်သမားတွေ အတိဒုက္ခရောက် သွားကြတဲ့ နမူနာတွေ ရှေ့မှာ အများကြီး။ ဘရာဇီး၊ အာဂျင်တီးနား၊ အီရတ်၊ ရဝမ်ဒါ၊ အင်ဒိုနီးရှားတို့မှာ Unholy Trinity လို့ ခေါ်တဲ့ IMF ၊ World Bank၊ WTO ( World Trade Organization ) တို့ တက်ညီလက်ညီ ပူးပေါင်းပြီး ဘယ်လို ဒုက္ခပေးခဲ့ကြတယ်ဆိုတာကို လေ့လာ ကြဖို့ သင့်ပါတယ်။
IMF ၊ World Bank ဆိုတာဟာ ဒီမိုကရေစီ မကျတဲ့ အဖွဲ့အစည်းပါ။ ဥရောပနဲ့ အမေရိကန်က ဗိုလ်ကျစိုးမိုးထားတဲ့ အဖွဲ့အစည်း၊ ဒီမိုကရေစီနည်းနဲ့ တနိုင်ငံတမဲ မဲခွဲခွင့် မရှိတဲ့ အဖွဲ့အစည်း၊ လက်တဆုပ်စာ နိုင်ငံတကာ ကော်ပိုရေးရှင်းကြီး တွေရဲ့ အကျိုးစီးပွားကိုပဲ ကြည့်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင်ကြီးများဟာ အလုပ်သမားအရေး၊ လယ်သမားအရေးကို ဘယ်လောက်များ အကာအကွယ်ပေးကြပါသလဲ။
အခု နိုင်ငံတကာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေ ဝင်လာဖို့ မျှော်လင့်နေကြတဲ့ အချိန်မှာလည်း NLD လို ဒီမိုကရေစီ ရည်မှန်းချက်ထားရှိတဲ့ ပါတီမျိုးကတောင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမယ့်သူတွေကို အကာအကွယ်ပေးမယ့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ဥပဒေထားရှိပေးဖို့ကိုသာ တောင်းဆိုပြီး၊ အလုပ်သမား အခွင့်အရေး ကာကွယ်ပေးတဲ့ ဥပဒေမျိုး ထားရှိဖို့ တောင်းဆိုတာမျိုး မတွေ့ရဘူး။ တိုင်ယီ အလုပ်သမားအရေး လိုဟာမျိုးမှာလည်း ဘာတခုမှ ဝင်မပြော၊ ဝင်မပါဘဲ ကိုယ်နဲ့ မဆိုင်သလို ရေငုံနှုတ်ပိတ်နေတာမျိုးကိုပဲ တွေ့ရတယ်။ တိုင်ယီအရေးဟာ အလုပ်သမား အရေးပါ။ ဗမာနိုင်ငံလို နိုင်ငံမျိုးမှာ အလုပ်သမား ပြဿနာ၊ လယ်သမားပြဿနာဆိုတာဟာ တနိုင်ငံလုံး ပြည်သူတွေရဲ့ အနာဂတ်နဲ့ ဆိုင်တဲ့ ရှေ့ပြေးပြဿနာဖြစ်တယ်။ ကြိုတင်ပြသတဲ့ နိုင်ငံရေး အတိတ်နိမိတ်ဖြစ်တယ်။ ဒါဟာ အသေးအဖွဲပြဿနာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာကို ဗမာ့နိုင်ငံရေး မှာ ခြေမြှောက် လက်မြှောက်လောက် ပါဖူးသူတောင် သိကြပါတယ်။
မကြာခင်က လယ်ယာမြေဥပဒေ ပြဌာန်းသွားခဲ့တယ်။ တောင်သူလယ်သမားတွေက မကွေးစစ္စရံညီလာခံ၊ ဟင်္သာတ သပြုအိုင်ညီလာခံ တွေလုပ်ပြီး အကြိမ်ကြိမ်ကန့်ကွက်ခဲ့တဲ့ကြားက ပြဌာန်းသွားခဲ့တဲ့ ဥပဒေပါ။ ကျွန်တော်တို့ကို ပြည်သူကရွေးကောက်ထားတာပါလို့ မရှက် မကြောက် အကြိမ်ကြိမ်ပြောင်ညာရဲကြတဲ့ ၂၀၁၀ မဲခိုး ကြံ့ဖွတ်အမတ်တွေဟာ အဲဒီလယ်သမားတွေရဲ့ အသံကို တချက်မှ အရေးမလုပ်ခဲ့ ကြဘူး။ တတိယအကြိမ်ပြုလုပ်မယ့် ကြို့ပင်ကောက်ညီလာခံကိုတောင် အာဏာသုံးပြီး တားခဲ့တယ်။ ဒီကိစ္စကိုလည်း ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေ နှာစေးခဲ့ပြန်တယ်။ သမ္မတကြီးစိတ်ဆိုးမှာ ကြောက်ကြပြန်သလား မပြောတတ်၊ လယ်သမားအရေးကို လျစ်လျူရှုခဲ့တယ်။
ဒီလိုနည်းနဲ့ ကိုယ့်လယ်မြေကိုယ်ပိုင်ခွင့်မရှိတဲ့ လယ်ယာမြေဥပဒေ၊ ကြိုက်တဲ့ သီးနှံစိုက်ပျိုးခွင့်မရှိတဲ့ လယ်ယာမြေဥပဒေ၊ စီမံကိန်းသီးနှံ စိုက်ရဦးမယ့် လယ်ယာမြေဥပဒေ၊ စစ်တပ်နဲ့ အစိုးရက လယ်သိမ်းပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ လယ်ယာမြေဥပဒေဟာ လယ်သမားတွေ ကန့်ကွက်တဲ့ ကြားထဲက အတည်ဖြစ်သွားခဲ့ပြန်တယ်။ လယ်သမားတွေကန့်ကွက်တဲ့ကြားက ပြည်သူ့လွှတ်တော်က အတည်ပြုသတဲ့။ ဒါလား.. ပြည်သူ့လွှတ်တော်။ ဒီလိုနာမည်မျိုးကို မရှက်မကြောက် မှည့်မှမှည့်ရဲကြပလေ။
စစ်အစိုးရကတော့ အလုပ်သမား၊ လယ်သမားတွေ ထိခိုက်မယ့် ကိစ္စမျိုးကို IMF ၊ World Bank ကပြင်ခိုင်း လုပ်ခိုင်းရင် လုပ်မှာပဲ။ တသက်လုံး အလုပ်သမားအကျိုး ၊ လယ်သမား အကျိုး မကြည့်ခဲ့တဲ့ စစ်အစိုးရဟာ အခုအချိန်ကျမှ ဘာမှ အကာအကွယ်ပေးနေမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ သိပ်သေချာတယ်။ သူတို့က IMF ၊ World Bank ကိုသိပ်လိုလားတာကိုး။ ဘာ့ကြောင့်သိပ်လိုလား သလဲဆိုတော့ အစိုးရနဲ့ သူတို့ရဲ့ ပုလင်းတူဗူးဆို့ ခရိုနီတွေ အတွက် သိပ်အကျိုးရှိမယ့် အချက်ဖြစ်လို့။ နိုင်ငံတကာ ကော်ပိုရေးရှင်းကြီးတွေရဲ့ အကျိုးကို ကြည့်တဲ့ IMF ၊ World Bank ရဲ့ မူဟာ ဗမာခရိုနီတွေရဲ့ အကြိုက်နဲ့ ကွက်တိဖြစ်နေလို့ပဲ။ IMF ၊ World Bank ရောက်လာပြီးနောက်မှာ ဒေသခံ ခရိုနီတွေ ကမ္ဘာကျော် ဘီလျံနာ၊ မီလျံနာကြီးတွေ ဖြစ်သွားကြတဲ့ အစဉ်အလာဟောင်းတွေကိုလည်း သူတို့ သိကြပြီးသား။ IMF ၊ World Bank တို့ရောက်လာပြီးနောက်မှာ ပြည်တွင်းကခရိုနီတွေနဲ့ ပြည်ပက နိုင်ငံပေါင်းစုံကော်ပိုရေးရှင်းကြီးတွေ အတူတကွ ချမ်းသာသထက် ချမ်းသာ သွားကြတာကလည်း ထုံးစံပဲ။ ဒါတွေကို သူတို့ သိပြီးသား။ တကယ်တန်း ဒုက္ခရောက်ကြမယ့်သူတွေကတော့ အလုပ်သမား၊ လယ်သမားအပါအဝင်ဖြစ်တဲ့ လူများစုပြည်သူကြီးပါ။ ၉၉% ပါ။ လယ်သမားတွေ လယ်မြေတွေ ဆုံးရှုံးပြီး လက်ခစားအလုပ်သမားတွေ ဖြစ်ကုန်ကြတာကိုပဲ အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေပေးနိုင်တယ်လို့ သူတို့ အမြဲ ကြွားဝါကြပါတယ်။ လုပ်ခဈေးချိုလို့ အလုပ်သမားတွေပေါပေါရှိတဲ့နေရာကို စက်ရုံတွေရောက်လာပြီး ညှင်းပန်းခိုင်းစေကြတာကိုပဲ၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေ တိုးတက်အောင်လုပ် ပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ အမြဲ ကြွေးကြော်ပါတယ်။ တကယ်တန်းမှာ အလုပ်သမားတွေဟာ အလုပ်ပိုလုပ်လာရတာပဲ ရှိတယ်။ ဘဝက ဘာမှ တိုးတက်မလာကြဘူး။ အလုပ်ပဲ ပိုရလာတယ်၊ ဝင်ငွေ ပိုရမလာဘူး။ သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံတွေမှာ အလုပ်သမားတွေကို ခုခံကာကွယ်ပေးထားတဲ့ ဥပဒေတွေ အလုံ အလောက် မရှိရင် အလုပ်သမားတွေဟာ စက်ရုံ အလုပ်ရုံတွေထဲမှာ ကျွန်စုပ်တဲ့သရက်စေ့ဘဝ ရောက်သွားကြတာချည့်ပဲ။ နီးနီးနားနား အင်ဒိုနီးရှားကိုပဲ ကြည့်ပါ။
အခုကျွန်တော်တို့ကို စစ်အစိုးရက တွန်းပို့နေတဲ့ လမ်းကြောင်းက စစ်ကျွန်ဘဝကနေ နင်းပြားဘဝ တွန်းပို့နေတဲ့ လမ်းကြောင်း ဖြစ်ပါတယ်။ စစ်အာဏာရှင်တစုတည်းက ဗိုလ်ကျ ကျွန်ပြုနေရာက စစ်အာဏာရှင် အပါအဝင်၊ ပြည်တွင်းပြည်ပ ဧရာမ အရင်းရှင်ကြီး တွေက ဝိုင်းဝန်း ကျွန်ပြုနိုင်မယ့် စနစ်ဆီ ဦးတည်နေတာပါ။ အဲဒီလမ်းကြောင်းပေါ်ကို သူတို့ ချောချောမောမောရောက်ဖို့ အတွက် အမေရိကန်ရဲ့ အကူအညီနဲ့ NLD ရဲ့ အကူအညီကို ရယူဖို့ သူတို့ ကြိုးစားနေကြတာပါ။ အမေရိကန်နဲ့ NLD ပါမှသာ ပြည်သူကို လှည့်စားလို့ ရနိုင်မှာမို့ သူတို့ အကူအညီကို လိုလားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဖာသာ သူတို့ ပြောင်းနေပါတယ် ပြောတာကို ပြည်သူက ဘယ်တော့မှ မယုံ၊ ဘယ်တော့မှ လက်မခံဘူး။ အခု NLD က အစိုးရပြောင်းပါပြီပြောတော့ တော်တော်များများ လက်ခံလာတယ်။ တော်တော်များများ ဇဝေဇဝါဖြစ်လာတယ်။ အချင်းချင်း အငြင်းအခုန်တွေ ဖြစ်ကုန်တယ်။ ဒါ့ကြောင့် အစိုးရဟာ NLD ရဲ့ အကူအညီ လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန်ရဲ့ အကူအညီကိုလည်း သူတို့လိုအပ်တယ်။ အမေရိကန်ရဲ့ အကူအညီမပါဘဲ သူတို့ ဒီ့ထက် ချမ်းသာဖို့ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ အမေရိကန်ရဲ့ အကူအညီမပါဘဲ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေ မလာနိုင်ဘူး။ ဒါ့ကြောင့် အမေရိကန်ရဲ့ အကူအညီကို သူတို့ လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်။
အခု အမေရိကန်က စိတ်ပါလက်ပါနဲ့ ကူညီနေတာ တွေ့ရတယ်။ သူ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ သူပါ။ NLD ကတော့ စိတ်မပါ့တပါနဲ့ ကူညီ နေတာကို ကျွန်တော်တို့ တွေ့နေရပါတယ်။ သူ့အခက်အခဲနဲ့ သူပါ။ စိတ်ပါသည်ဖြစ်စေ၊ စိတ်မပါသည်ဖြစ်စေ အမေရိကန်နဲ့ NLD ဟာ စစ်အစိုးရရဲ့ ပါရမီဖြည့်ဖက်တွေ ဖြစ်လာပါတယ်။
အခုချိန်မှာ အမေရိကန်ဟာ NLD နဲ့ ဗမာပြည်သူတွေရဲ့ ဒီမိုကရေစီရေးထက် သူတို့ ရင်းနှီးမြုပ်နှံဖို့ သူတို့ နောက်ကျမကျန်ဖို့ကိုသာ စိတ်စော နေပုံရပါတယ်။ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ အကြိုကာလမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်ခင် ကြိုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာ သတိချပ်ဖို့လိုပါတယ်။ အဲဒီ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲဟာ မတရားဘူးလို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ အနောက်နိုင်ငံတွေ အနေနဲ့ ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့တာတွေကို မလျော့ပါနဲ့ဦးလို့ သတင်းစကားပေးပို့တာပါ။ ဒါ့အပြင် ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့တဲ့သူတွေအနေနဲ့ သူတို့ ပိတ်ဆို့တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကို ရပြီလားဆိုတာ စဉ်းစားပြီးမှ ပိတ်ဆို့တာကို ဖွင့်ပါလို့လည်း ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ် ဦးဥာဏ်ဝင်းက အတန်တန် သတိပေးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အမေရိကန် ဘာလုပ်ခဲ့သလဲ။ စစ်အစိုးရ အငမ်းမရလိုချင်နေတဲ့ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်တွေကို ဖွင့်ပေးပြီး ပြည်ပရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေ ဝင်လို့ရအောင် တံခါးဖွင့်ပေးလိုက်တာပဲ မဟုတ်လား။ စစ်အစိုးရဘက်က သိပ်အူမြူးသွားသလောက်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဘက်ကတော့ အောင့်သက်သက်နဲ့ အခံရခက်မဲ့ပုံပါပဲ။
စစ်အစိုးရ အတွက်တော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို နေရာလေးဆယ်ကျော်ပေးရကျိုး နပ်လှပါပေရဲ့။ ပေးရတာ သိပ်ကို တန်လှပါပေရဲ့။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ထုတ်ပြီး အသုံးချရတာဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အိမ်ထဲမှာ ချုပ်ထားရတာထက် အများကြီး ပိုအကျိုး ရှိတယ်ဆိုတာကို အသိနောက်ကျလေခြင်းလို့ စစ်အစိုးရမှာ တက်တခေါက်ခေါက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေမှာပါ။ ကုန်ခဲ့တဲ့ နှစ်တွေကို နှမျောကောင်း နှမျောနေမှာပါ။
NLD ကို ဘယ်လို သဘောထားရမလဲ
ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူတွေဟာ NLD ကို ထောက်ခံကြတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ထောက်ခံကြတယ်။ မကြုံစဖူး ကြီးမားတဲ့ အင်အားနဲ့ ထောက်ခံကြပါတယ်။ အဲသလို ထောက်ခံကြတာ ဟာ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို စက်ဆုပ်ရွံရှာလို့သာ ဖြစ်တယ်။ NLD ဟာ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို ဖြိုချပေးနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်နေကြသေးလို့သာဖြစ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ NLD ကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို စစ်အစိုးရက အသုံးချပြီး သူ့လိုဘ ပြည့်အောင်ဖြည့်ဖို့ ကြိုးစားရင် ကျွန်တော်တို့ဟာ NLD ကို ထောက်ခံရင်းနဲ့ စစ်အစိုးရလိုဘ ဖြည့်ပေးတဲ့ အဖြည့်ခံဘဝ ရောက်သွားနိုင်တာကိုတော့ သတိထားကြရလိမ့်မယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က စစ်အစိုးရရဲ့ ပါရမီဖြည့်ဖက် ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့လည်း ဘုမသိဘမသိ ကူညီပါရမီဖြည့်ရာရောက်တော့မယ်။ ကျွန်ဝယ်ရာမှာ ကျွန်တော်တို့ အဆစ်ပါကြလိမ့်မယ်။
ကျွန်တော်တို့မှာ ရွေးစရာလမ်းနှစ်လမ်းရှိတယ်။ NLD ကို ဒီမိုကရေစီ အသွင်သဏ္ဍန် စစ်စစ်မှန်မှန် ပြန်ဖြစ်လာအောင် ကြိုးစားကြမလား။ ဒါမှမဟုတ် NLD ကို စွန့်ခွာကြမလားဆိုတဲ့ လမ်းနှစ်လမ်းဖြစ်ပါတယ်။ NLD အနေနဲ့ ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်မယ်ဆိုတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို မပြင်သေးသမျှ၊ NLD ကိုလူထုက ထောက်ခံနေသေးသမျှမှာ ကျွန်တော်တို့ဟာ သည်းခံပြီး လက်တွဲ ရဦးမယ် ထင်ပါတယ်။ ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေကို မပြင်တော့ဘူးလို့ NLD ကပြောလာတဲ့ အခါ၊ ဒါမှ မဟုတ် မပြင်နိုင်တော့ဘူးလို့ လူထုက ယူဆလာတဲ့ အချိန်မှာတော့ NLD ကို ကျွန်တော်တို့ စွန့်ခွာကောင်း စွန့်ခွာရပါလိမ့်မယ်။
ဒီနေရာမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြောတဲ့ စကားနှစ်ခွန်းကို သတိထားသင့်ပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲ မဲဆွယ်မိန့်ခွန်းမှာပြောတဲ့ စစ်သား တမတ်သား လွှတ်တော်ထဲမှာ ရှိနေတာဟာ ဒီမိုကရေစီ မကျဘူးဆိုတာနဲ့၊ စစ်တပ်ကို နိုင်ငံရေးက ဖယ်ထုတ်ဖို့ သူမပြောဘူးဆိုတဲ့ စကားဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစကားနှစ်ခွန်းဟာ ရှေ့နောက်မညီပါဘူး။ မရှင်းလင်းပါဘူး။ ဒီမိုကရေစီနဲ့ မကိုက်ညီတဲ့ တပ်မတော်သား ၂၅ % ကို လွှတ်တော်ထဲက ထွက်ခွာပေးဖို့ရာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အနေနဲ့ ရဲရဲရင့်ရင့် ပြတ်ပြတ်သားသား မပြောရဲတာထင်ရှားပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် စကားဝဲလာတယ်။ မပီကလာ ပီကလာ ဖြစ်လာပါတယ်။ ရပ်တည်ချက် မပြတ်သားလို့ အပြောအဆို မပြတ်သားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီနဲ့ မကိုက်ညီသော်ငြားလည်း စစ်တပ်ကို မဖယ်ရှားပါဘူးလို့ သူ့အနေနဲ့ ဆိုလိုသလား ဆိုတာလည်း စဉ်းစားစရာဖြစ်ပါတယ်။ စစ်တပ် ၂၅ % ကို ဖယ်ရှားဖို့တောင် မပြောရဲတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ သူ့ရဲ့ လက်ညှိုးထောင် ခေါင်းငြိမ့် NLD ကို ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လောက် ဆက်အားကိုးလို့ရမလဲဆိုတာလဲ စဉ်းစားစရာ….။
တကယ်လို့ တပ်မတော်သား ၂၅ % ကို ဖယ်ထုတ်ဖို့ မကြိုးစားဘူးဆိုရင် အခြေခံဥပဒေပြင်မယ်ဆိုတာ ဘာပြင်မှာပါလဲ။ ဒါ့အပြင် တပ်မတော်သားတွေနဲ့ ကြံ့ဖွတ်တွေကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က စည်းရုံးပြီး လွှတ်တော်ထဲမှာ အင်အားတိုးချဲ့သွားဦးမယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။ တပ်မတော် ကြီးစိုးတဲ့ စစ်အာဏာရှင် အခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဖို့ အတွက် တပ်မတော်သားတွေနဲ့ ကြံ့ဖွတ်တွေကို ဘယ်လိုစည်းရုံးမှာပါလဲ။ ဘယ်နှယောက်စည်းရုံး လို့ ရမှာပါလဲ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အထင်ကြီးလွန်နေ ပါသလား။ ဒါမှမဟုတ် ပြည်သူတွေကို မျှော်လင့်ချက်မှားတွေ ပေးနေပါသလား။ ဒါမှ မဟုတ်တခြားလည်း ဘာမှ မလုပ်တတ်တော့လို့ အလုပ်မဖြစ်မှန်းသိပေမဲ့ သိသိနဲ့ ရှေ့ဆက်တိုးနေတာလား။ ဒီအဖြေကို သိဖို့ရာ ကျွန်တော်တို့ မျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်ရပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံဟာ အစွန်းရောက် အရင်းရှင်စနစ်ဆီ ဦးတည်မယ့် အရိပ်အယောင်တွေ မြင်နေရချိန်မှာ နိုင်ငံတကာမှာတော့ အရင်းရှင် ဆန့်ကျင်ရေး လှုပ်ရှားမှုတွေ ကျယ်ပြန့်လာတယ်။
IMF ၊ World Bank၊ WTO ( World Trade Organization ) တို့နဲ့ ကမ္ဘာမှာ ၁ ရာနှုန်းတောင်မရှိတဲ့ နိုင်ငံပေါင်းစုံ ကော်ပိုရေး ရှင်းကြီးတို့ ပူးပေါင်းပြီး လူများစု ကမ္ဘာ့လူထုကြီးကို အမြတ်ထုတ်သွေးစုပ်တာကို မခံနိုင်ကြတော့လို့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ၉၉ ရာနှုန်း သို့မဟုတ် Occupy ဆိုတဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေ အနှံ့ အပြားပေါ်လာတယ်။
ဒီနေ့ Occupy လှုပ်ရှားမှုတွေဟာ ၁၉၉၉ ခုနှစ်တုန်းက ဆီယယ်တဲလ်မှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်း ဆန့်ကျင် လှုပ်ရှားမှု (antiglobalization ) ၊ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ တရားမျှတရေး လှုပ်ရှားမှု ( global justice movement) ရဲ့ အဆက်လို့ ဆိုရင် ဆိုနိုင်တဲ့ လှုပ်ရှားမှု ဖြစ်ပါတယ်။ ဆီယယ်တဲလ် လှုပ်ရှားမှုဟာ IMF ၊ World Bank၊ WTO ( World Trade Organization ) တို့ရဲ့ တကမ္ဘာလုံးမှာ မတရားလုပ်နေတာတွေကို ကန့်ကွက်တဲ့ လှုပ်ရှားမှုကြီးပါ။
အခု Occupy လှုပ်ရှားမှုတွေကတော့ ဒီ့ထက်ပိုကြီး ဒီ့ထက်ပိုလေးနက်ပါတယ်။ အနောက်ကမ္ဘာမှာ စီးပွားပျက်ကပ်ဆိုက်တော့ ကော်ပို ရေးရှင်းကြီးတွေ၊ ကမ္ဘာ့ထိပ်သီးလက်တဆုပ်စာတွေကို အစိုးရတွေက အကာအကွယ်ပေးကြတယ်။ သူတို့အတွက် ငွေကြေးအမြောက် အများစိုက်ထုတ် ပံ့ပိုးပေးကြတယ်။ အဲဒီလို ပံ့ပိုးပေးနိုင်ဖို့ အတွက် အများပြည်သူတွေအတွက် သုံးတဲ့ အသုံးစရိတ်တွေကို ဖြတ်တောက် ကြတယ်။ အများပြည်သူ အတွက် အသုံးစရိတ်ဆိုတာဟာ နို့စို့ကလေးတွေအတွက် ထောက်ပံ့ကြေး၊ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေ အတွက် ထောက်ပံ့ကြေး၊ ပင်စင်ငွေတွေက အစ၊ အများပြည်သူအတွက် ကျန်းမာရေး ထောက်ပံ့စရိတ်၊ လူမှုဖူလုံရေး အတွက်ပေးတဲ့ ငွေဆိုတာ မျိုးတွေ အားလုံးဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတော့ ၁ ရာနှုန်းအကျိုးအတွက် မတရားလုပ်နေတဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို တားမြစ်ဟန့်တားဖို့ သိမ်းပိုက်ရေး လှုပ်ရှားမှုတွေဟာ တကမ္ဘာလုံး ပြန့်နှံ့လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လှုပ်ရှားတဲ့ ပထမဆုံး သိမ်းပိုက်ရေး လှုပ်ရှားမှုက Occupy Wallstreet ဝေါလမ်းမကို သိမ်းပိုက်ကြဆိုတဲ့ လှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၁ ခု စက်တင်ဘာလ ၁၇ ရက်နေ့မှာ စဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အခုအထိ နိုင်ငံပေါင်း ၈၂ နိုင်ငံက မြို့ကြီးပေါင်းမှာ ၉၅ မြို့မှာ သိမ်းပိုက်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေဖြစ်ခဲ့၊ တချို့ ဖြစ်နေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ငါတို့ဟာ ၉၉ ရာနှုန်း We are 99 % ဆိုတာဟာ သူတို့ရဲ့ ကြွေးကြော်သံဖြစ်ပါတယ်။
အာရပ်နွေဦး လှုပ်ရှားမှုတွေဟာလည်း သိမ်းပိုက်ရေး လှုပ်ရှားမှုတွေကို ပိုမိုတက်ကြွအားကောင်းလာစေခဲ့တယ်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်ထဲမှာတော့ IOPS International Organization foraParticipatory Society ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။
အခုချိန်အထိ မြင်တွေ့နေရတာက သူတို့ လှုပ်ရှားမှုတွေကို နိုင်ငံနယ်နမိတ်စည်းကန့်သတ်ချက်ကို ကျော်လွန် ဆောင်ရွက်နိုင်လာတဲ့ အချက်နဲ့ သူတို့လှုပ်ရှားမှုတွေဟာ ပါတီတခု အဖွဲ့အစည်းတခုတည်းက ဦးဆောင်နေတာ မဟုတ်ဘဲ၊ လူများစု ဆင်းရဲသား လူထုကြီးရဲ့ လှုပ်ရှားမှုဖြစ်နေတာကို တွေ့ရတဲ့ အချက်ပါပဲ။
သူတို့ရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေဟာ ခေါင်းဆောင်တဦးတယောက်ကို ဒါမှမဟုတ် တချို့ကို ဗဟိုပြုလှုပ်ရှားတာမျိုး မဟုတ်တာကိုလည်း အတိတ်က လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ မတူတဲ့ ထူးခြားချက်တရပ် အဖြစ်တွေ့ရပါတယ်။ သူတို့လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ တွဲပြီး နာမည်ကျော်ခေါင်းဆောင်ကြီး ဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုပြီး ထွက်ပေါ်လာတာမျိုး အခုထိ မတွေ့ရသေးဘူး။ ခေါင်းဆောင်ရဲ့ နောက်မှာ အားလုံးစုဝေးလိုက်ပါတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ၊ ခေါင်းဆောင် ကြည်ညိုကိုးကွယ်မှုနဲ့ လှုပ်ရှားကြတာမဟုတ်ဘဲ၊ ကိုယ့်အစုနဲ့ ကိုယ်၊ ကိုယ့်အသိနဲ့ ကိုယ် လှုပ်ရှားကြတာမျိုးကို တွေ့ရတယ်။ ဒီလှုပ်ရှားမှုတွေဟာ ကျွန်တော်တို့ လေ့လာသင့်တဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူတွေ၊ အလုပ်သမားတွေ၊ လယ်သမားတွေ၊ ကျောင်းသားတွေ၊ သံဃာတွေ၊ ဝန်ထမ်းတွေကရော ဗမာပြည်ကို သိမ်းပိုက်ကြဖို့ မသင့်ပေဘူးလား။ ကျွန်တော်တို့တတွေ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး ကြဖို့ မသင့်ပေဘူးလား။ ဗမာပြည်ဟာ တကယ်တော့ ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်ပဲ မဟုတ်လား။ ဗမာပြည်ကို သိမ်းပိုက်ရေး အတွေးအခေါ်ကလည်း ကျွန်တော်တို့ အတွက်သိပ်မစိမ်းလှပါဘူး။ ဒို့ဗမာ သီချင်းမှာကတည်းက ဒါဒို့ပြေ၊ ဒါဒို့မြေ၊ ဒါငါတို့ပြေ လို့ ကြွေးကြော်ခဲ့ကြတယ်မဟုတ်လား။
ဒါ့ကြောင့် အလုပ်သမားတွေ၊ လယ်သမားတွေ၊ ကျောင်းသားတွေ ၊ သံဃာတွေ ခေတ်နဲ့ အမီလိုက်ကြရအောင်ပါ။ ဆီပူဒယ်အိုးထဲကနေ မီးပုံထဲကို ခုန်မချကြပါနဲ့။ ၁% အတွက် ဒီမိုကရေစီကို ကျွန်တော်တို့ မလို၊ ၉၉% အတွက် ဒီမိုကရေစီကို ကျွန်တော်တို့ လိုပါတယ်။ အလုပ်သမား၊ လယ်သမား၊ ဝန်ထမ်း၊ ကျောင်းသားနဲ့ သံဃာတွေဟာ ၉၉% ပါ။ ဘယ်နိုင်ငံခြားကိုမှ မမီခိုဘဲ၊ ဘယ်သူ့ကိုမှ အားမကိုးဘဲ ကိုယ့်အားကိုကိုးပြီး ဗမာပြည်ကို သိမ်းပိုက်ကြပါစို့။
ဧပြီ ၁၀ ရက်။ ၂၀၁၂ခု။
Posted by ကိုပေါ on Friday, April 20, 2012
ဗမာပြည်ကို သိမ်းပိုက်ကြ Occupy Burma! အပိုင်း ၁
ဗမာ့ လမ်းကြောင်း ကမ္ဘာနဲ့ ပြောင်းပြန်
ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံဟာ နိုင်ငံတကာက အတွေး အမြင်တွေ အဖြစ်အပျက်တွေကို ရယူတဲ့ နေရာမှာ ခြေတလှမ်း အမြဲ နောက်ကျခဲ့တယ်။ တချိန်က မာ့စ်ဝါဒ၊ လီနင်ဝါဒ ကျွန်တော်တို့ဆီကို ရောက်လာတဲ့အချိန်ဟာ ကမ္ဘာမှာ အောက်တိုဘာတော်လှန်ရေး ဖြစ်ပွားပြီးနောက် နှစ်ပေါင်း နှစ်ဆယ်လောက်နောက်ကျခဲ့တယ်။ ကားလ်မာ့စ် အရင်းကျမ်း ရေးခဲ့တဲ့ အချိန်ထက် နှစ်ပေါင်း ၇၀ လောက်နောက်ကျခဲ့တယ်။
အခုတခါ ကမ္ဘာနဲ့ တဝှန်း သိမ်းပိုက်ရေး လှုပ်ရှားမှု (Occupy movement ) တွေ ပြန့်နှံ့နေတဲ့ အချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာတော့ ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်း အော်လို့ ကောင်းနေတုန်း။ ကမ္ဘာပြားပြီ လုပ်နေကြတုန်း။ ကမ္ဘာမှာ အရင်းရှင်စနစ်ကို တွန်းလှန်တိုက်ခိုက်နေကြချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ကတော့ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို တိုက်ပြီး အရင်းရှင်စနစ်ဆီကို သွားဖို့ စိတ်အားထက်သန်နေကြသလို ဖြစ်နေတယ်။ ဘယ်လိုလဲ။ တခေတ်လုံးလုံး နောက်ကျဦးတော့မှာပါလား။ ကမ္ဘာပြားပြီဆိုတဲ့ သောမတ်ဖရီးမင်းတို့၊ ယဉ်ကျေးမှု တိုးတိုက်ခြင်းဆိုတဲ့ ဟန်တင်တန်တို့ ကို ကမ္ဘာမှာတော့ အပေါစား အမေရိကန် ဝါဒဖြန့်ချိရေးသမားလောက်ပဲ သဘောထားကြချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ အခုထိ အသစ်ထင် နေကြတဲ့သူတွေ တော်တော်များများရှိနေတုန်း။ တကယ်တော့ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကနေ အရင်းရှင် စနစ်ဆီ ကူးပြောင်းမယ်ဆိုတာဟာ ဆီပူဒယ်အိုးထဲကနေ မီးဖိုထဲ ခုန်ချသလိုသာရှိမှာပ။ အပူသက်သာရင်လည်း နည်းနည်းပဲ။ ပိုပူချင်တောင် ပူနိုင်သေး။
ကျွန်တော်တို့ အခု သွားနေတဲ့ လမ်းကြောင်းဟာ ကမ္ဘာ့ပြည်သူတွေရဲ့ လမ်းကြောင်းနဲ့ ပြောင်းပြန်ကြီးဖြစ်နေတယ်။ ကမ္ဘာမှာ အရင်းရှင်ထမ်းပိုး၊ ကော်ပိုရေး ရှင်းထမ်းပိုးကို ပုခုံးပေါ်က ခါချနေတဲ့ အချိန် ကျွန်တော်တို့ကတော့ အရင်းရှင်ထမ်းပိုးကို ခါးတောင်းကျိုက်ပြီး ထမ်းဖို့ ဟန်တပြင်ပြင်။ ကြည့်ပါဦး။ စစ်ကျွန်ဘဝကနေ ငွေဝယ်ကျွန်ဘဝကိုများ ကျွန်တော်တို့ သွားကြဦးမလို့လား။ စစ်ကျွန်ဘဝကနေ လွတ်ဖို့ရာ ငွေဝယ်ကျွန်အဆင့်ကို မဖြတ် သန်းဘဲ လွတ်နိုင်တဲ့ နည်းမရှိတော့ဘူးလား။ ဘယ်သူ့ကျွန်မှမခံဘဲ ဒီမိုကရေစီ စစ်စစ်ရတဲ့ လွတ်လပ်တဲ့ ပြည်သူတွေ မဖြစ်နိုင်ဘူးလား။
စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကနေ အရင်းရှင်အာဏာရှင်စနစ်ဆီသွားချင်နေကြတာ ဘယ်သူတွေပါလဲ။ အလုပ်သမား၊ လယ်သမား လူများစု ပြည်သူတွေ မွဲငတ်ပြီး လက်တဆုပ်စာ လူနည်းစု အရင်းရှင်ကြီးတွေ ကျိကျိတက် ချမ်းသာမယ့်လမ်းကို သွားချင်နေတာ ဘယ်သူတွေပါလဲ။ ၉၉% ကမွဲသထက်မွဲပြီး ၁% ကချမ်းသာသထက်ချမ်းသာမယ့်လမ်းကို သွားချင်နေတာ ဘယ်သူတွေလဲ။ တခြားသူတွေ ဟုတ်ပါရိုးလား။ ဒီနေ့ တိုင်းပြည်ကို အုပ်ချုပ်ဗိုလ်လုပ်နေတဲ့ စစ်အာဏာရှင်တွေပါပဲ။
မှန်ပါတယ်။ တကယ်တော့ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကနေ စစ်တပ်လွှမ်းမိုးတဲ့ အရင်းရှင်စနစ်ဆီသို့ ငြိမ်းချမ်းစွာ အသွင် ကူးပြောင်းလို သူတွေထဲမှာ စစ်အာဏာရှင်တွေက ထိပ်ဆုံးကပါ။
အခု တလော ကိုမင်းကိုနိုင်တို့ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားတွေ မကြာခဏ ပြောကြတဲ့ စကားတခွန်းရှိတယ်။ မပြောင်းလဲရင် မဖြစ်တော့ ဘူးဆိုတာကို အုပ်ချုပ်သူတွေကိုယ်တိုင် သိလာလို့ အပြောင်းအလဲတွေ စတင်ပေါ်ပေါက်လာတယ်ဆိုတဲ့ စကားပါ။ ဒီစကားဟာ မမှားဘူး၊ ဒါပေမဲ့ မပြည့်စုံဘူးလို့ ဆိုရလိမ့်မယ်။ စစ်အစိုးရကို လျော့တွက်ပြီး အကောင်းမြင်လွန်းနေတယ်။
မပြောင်းလဲရင် မဖြစ်တော့ဘူး၊ ဒီပုံစံအတိုင်းဆက်သွားလို့ ရေရှည် မရတော့ဘူး၊ ပြည်သူကဆက်ပြီး ခေါင်းငုံ့ခံမှာ မဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာ စစ်အာဏာရှင်တွေသိလာတယ်ဆိုတာ အမှန်ပဲ။ ဘယ်မှာ သိသွားသလဲဆိုတော့ ၂၀၀၇ သံဃာ့လှုပ်ရှားမှုကြီးမှာ သိသွားကြတယ်။ သူတို့ သိပ်ကြောက်သွားတယ်။ လူထုက ပုန်ကန် တော်လှန်မှာကို သူတို့ကြောက်တယ်။ သူတို့ စစ်တပ်ထဲက ပြန်ပြီး တော်လှန်မှာကို ပိုပြီး ကြောက်တယ်။ ဒါ့ကြောင့် မပြောင်းမဖြစ်၊ ပြောင်းမှဖြစ်မယ်လို့ သူတို့သိလာတယ်။ အဲဒီလို မပြောင်းမဖြစ်တဲ့ အဆုံးမှာ စစ်အစိုးရဟာ အပြောင်းအလဲ အရိပ်အယောင်ကို စပြီး ပြလာတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ ပြောင်းချင်တာက ဘယ်လို ပြောင်းချင်တာလဲ ဆိုတော့ ဖိနှိပ်တဲ့ အသွင်သဏ္ဍန်ကို ပြောင်းချင်တာဖြစ်တယ်။ ဖိနှိပ်တဲ့ စနစ်ကနေ မဖိနှိပ်တဲ့ စနစ်ဆီကို ပြောင်းချင်နေတာ မဟုတ်ဘူး။ စစ်အာဏာရှင် စနစ်ကနေ ဒီမိုကရေစီ စနစ်ကို ပြောင်းချင်နေတာ မဟုတ်ဘူး။ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကနေ စစ်တပ်လွှမ်းမိုး ကြီးစိုးသော အရင်းရှင် အာဏာရှင်စနစ်ဆီ ပြောင်းချင်နေတာ ဖြစ်တယ်။ ခေတ်မမီတော့တဲ့ ဖိနှိပ်မှု အသွင်ဟောင်းကနေ ခေတ်မီတဲ့ ဖိနှိပ်မှု အသွင်သစ်ဆီကို ပြောင်းချင် တာသာ ဖြစ်တယ်။
တရုတ်ကို အားကိုးပြီး ပြည်သူကို ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်တဲ့ ပုံစံကနေ၊ အမေရိကန်နဲ့ ဥရောပကို အားကိုးပြီး ပြည်သူကို ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်တဲ့ ပုံစံသစ်ကို ပြောင်းလဲချင်နေတာသာ ဖြစ်တယ်။ အဲသလို ပုံစံပြောင်းလဲတဲ့ အခါ ဖိနှိပ်တဲ့ ပုံစံ အသွင်သဏ္ဍန်ကိုသာ ပြောင်းလဲပြီး ဖိနှိပ်မှုဆိုတဲ့ အနှစ်သာရကိုတော့ သူတို့ မပြောင်းချင်ဘူး။ ဒါ့အပြင် ဖိနှိပ်မှု အသွင်သဏ္ဍန်ကို ပြောင်းလဲတဲ့အခါ ဆက်လက် အခွင့် ထူးခံ မယ့် ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ ဒီလူတွေပဲ ဆက်ဖြစ်နေရေး၊ သူတို့ အုပ်စုပဲ ဆက်ဖြစ်နေရေးဟာ စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ အဓိက ရည်မှန်းချက်ပါပဲ။
မူလဖိနှိပ်မှု အသွင်ဟောင်း ဖြစ်တဲ့ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ လူသတ်စစ်အစိုးရကို ပြည်သူတွေက လက်မခံကြတော့ဘူး။ ဒီပုံစံနဲ့ ဆက်သွားလို့မရတော့ဘူး။ ဒါ့ကြောင့် ဒီလူတွေကိုပဲ တံဆိပ်အသစ်ကပ်ပြီး စစ်အုပ်စုလွှမ်းမိုးသော အရင်းရှင်အာဏာရှင်စနစ် အဖြစ် ဖိနှိပ်မှု အသွင်သစ်ပြောင်းဖို့ ကြိုးစားတာဖြစ်တယ်။ ပြည်သူတွေနဲ့ နိုင်ငံတကာကို အသွင်သဏ္ဍန်အပြောင်းအလဲနဲ့ လှည့်စားပြောင်းလဲ ပြတာဖြစ်ပါတယ်။ လူလက်မခံတော့တဲ့ ဖိနှိပ်မှု အသွင်ဟောင်းကနေ လူတွေကို လှည့်စားလို့ ရလောက်တဲ့ ဖိနှိပ်မှု အသွင်သစ်ဆီ ပြောင်းချင်တာဖြစ်တယ်။ အတိတ်မှာတုန်းက စစ်အာဏာသိမ်းတော်လှန်ရေး အစိုးရကိုလူတွေ လက်မခံတော့ မဆလထောင်ပြီး လှည့်စားတဲ့ နည်းမျိုးနဲ့ လှည့်စားချင်တာဖြစ်တယ်။ ဆိုရှယ်လစ်ကို ပြည်သူတွေလိုချင်နေတဲ့ အချိန်မှာ ဆိုရှယ်လစ် အတုအယောင်နဲ့ လှည့်စားပြီး ဒီမိုကရေစီကို ပြည်သူတွေလိုချင်တဲ့ အချိန်မှာ ဒီမိုကရေစီအတုအယောင်နဲ့ လှည့်စားဖို့ ကြိုးစားနေတာဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့ရဲ့ အခုလို ဖိနှိပ်မှု အသွင်သဏ္ဍန်ပြောင်းလဲမှုကြောင့် အတိုက်အခံတွေကြားမှာ အမြင်ရှုပ်ထွေးလာတာလည်း အမှန်ပဲ။ တချို့က စစ်အစိုးရဟာ ဒီမိုကရေစီ အဖြစ် အသွင်ပြောင်းတော့မယ်လို့ထင်လာတယ်။ တချို့က လုံးဝမပြောင်းဘူး၊ ဟန်ပြလုပ်ရပ်တွေလို့ထင် တယ်။ တချို့ကပြောင်းတော့ပြောင်းတယ်၊ ကောင်းမလာဘူးလို့ မြင်ကြတယ်။ ဒီလို အမြင်ကွဲကြတဲ့ အထဲမှာ ပိုဆိုးလာတာ ကတော့ “စစ်အစိုးရထဲက ပြောင်းလဲနေတာကို ရပ်သွားမှာစိုးလို့ စစ်အစိုးရကို မဝေဖန်ကြပါနဲ့၊ ဦးသိန်းစိန် အခက်တွေ့မှာစိုးလို့ တောင်းဆို တာတွေ၊ ဆန္ဒပြတာတွေ၊ တိုက်ပွဲဝင်တာတွေ မလုပ်ကြပါနဲ့၊ မတရား အဖိနှိပ်ခံကြရပေမဲ့ သည်းခံကြပါ၊ စောင့်ဆိုင်းကြပါ” ဆိုပြီး ကိုယ့်လူကိုယ် ပြန်တားတာမျိုးတွေ၊ ခေါင်းငုံ့ခံခိုင်းတာမျိုးတွေ အထိဖြစ်လာတယ်။ အဆိုးဆုံးဖြစ်လာတာကတော့ ကိုယ့်အခွင့်အရေး ကိုယ် တောင်းဆို တိုက်ပွဲဝင်ကြသူတွေ၊ မတရားအလုပ်ခံရလို့ တုန့်ပြန်ကြသူတွေကိုတောင် “သမ္မတကြီးနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ရဲ့ ပွဲကို ဖျက်တယ်” လို့ စွပ်စွဲလာကြတဲ့ အထိဖြစ်လာတယ်။
စစ်အစိုးရအတွင်းမှာလည်း စစ်အာဏာရှင်စနစ်ပီပီသသနဲ့ ရက်ရက်စက်စက်ပြတ်ပြတ်သားသား ဆက်လက် အုပ်ချုပ်ချင်သူတွေနဲ့ ခေတ်မီပုံစံပြောင်းပြီး “စစ်တပ်ကြီးစိုးသော အရင်းရှင်အာဏာရှင်စနစ်ပုံစံ” နဲ့ ပြည်သူကို လှည့်ဖျားအုပ်ချုပ်ချင်သူတွေအကြား လုပ်နည်း လုပ်ဟန် ကွဲပြားမှုတွေ တွေ့လာရတယ်။ လုပ်နည်းလုပ်ဟန်ပဲ ကွဲတာဖြစ်တယ်။ အခြေခံသဘောထား မကွဲဘူး။ မူမကွဲဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဒါကိုပဲ စစ်အုပ်စုကြားမှာ အပျော့အမာကွဲနေပြီဆိုပြီး အတိုက်အခံတွေကြားမှာ အားတက်သူက အားတက်ကြတယ်။ ငါတို့ ဘက်သား (သူတို့ အထင် )အပျော့ ကလေးတွေကို အမာက မျိုမသွားအောင်ဆိုပြီး ကိုယ့်လူကိုယ် ပြန်ဟန့်သူကဟန့်ကြတယ်။
တကယ်တော့ စစ်တပ်ထဲမှာ အပျော့အမာကွဲနေတယ်ဆိုတာလည်း သူတို့ စစ်တပ်ကပဲ သတင်းလွှင့်ထားတာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အများဆုံးသတင်းလွှင့်ကြတာကတော့ အပျော့တွေလို့ နာမည်ခံထားကြတဲ့ ရထားဝန်ကြီး ဗိုလ်အောင်မင်းတို့၊ စက်မှုဝန်ကြီး ဗိုလ်သိန်းစိုး တို့က ဗဟုတို့ သမ္မတ အကြံပေးတို့ ဆိုသူတွေဆီကနေတဆင့် တိုးတိုးတိတ်တိတ် အလံရှူးလုပ်ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အပြောင်းအလဲ အစ အမေရိကန်က
စစ်အာဏာရှင်တွေအတွက် မပြောင်းမဖြစ်တဲ့ အခြေအနေကို ရင်ဆိုင်လာရချိန်မှာပဲ သူတို့လိုချင်တဲ့ အပေါ်ယံအပြောင်းအလဲ၊ ဖိနှိပ်မှု အသွင်သဏ္ဍန်အပြောင်းအလဲကို လုပ်နိုင်မယ့် အခွင့်အလမ်းပေါ်လာတယ်။
သူတို့ အသွင်ပြောင်းချင်တဲ့ အချိန်ဟာ အမေရိကန်က ဆက်မအောင့်နိုင်တော့ဘဲ ပေါ်လစီ ပြောင်းမယ့်ကာလနဲ့ လာတိုက်ဆိုင်နေတယ်။ အဲသလို တိုက်ဆိုင်နေတဲ့ အတွက်လည်း စစ်အစိုးရ အနေနဲ့ သူပြောင်းလဲချင်တဲ့ ပုံစံနဲ့ ပြောင်းလဲလို့ ရနိုင်ဖို့ အသက်ရှူပေါက် ပွင့်လာတယ်။ ဒါကတော့ သူတို့ စစ်အာဏာရှင်တွေ ကံကောင်းပြီး ပြည်သူတွေ ကံဆိုးတဲ့ အချက်ပါပဲ။
စစ်အစိုးရက ဖိနှိပ်မှု အသွင်ပြောင်းပြီး လူရာဝင်ချင်တဲ့ အချိန်မှာ အမေရိကန်နဲ့ ဥရောပကလည်း တဘက်မှာ စီးပွားပျက်လာတယ်။ သူတို့ အနေနဲ့ အာရှကို ခြေဦးလှည့်ဖို့ စိတ်အားထက်သန်လာတယ်။ ဗမာပြည် ဒီမိုကရေစီ ရတဲ့ အထိ ဆက်မစောင့်နိုင်တော့ဘူး။ သူတို့ ဆက်ပြီး မအောင့်နိုင်ကြတော့ဘူး။ တကယ်တော့လည်း အမေရိကန်ရဲ့ ပေါ်လစီဟာ ဗမာတနိုင်ငံတည်းနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ ပေါ်လစီ မဟုတ်ဘူး။ အာရှတခုလုံးနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ ပေါ်လစီ။ အာရှမှာ တရုတ်လွှမ်းမိုးတာကို တားဆီးပြီး အမေရိကန် ဥရောပ လွှမ်းမိုးနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်မယ့် ပေါ်လစီ။ ဒါ့ကြောင့် ၂၀၀၉ ခုနှစ် အာဆီယံ အစည်းအဝေးမှာ TAC ASEAN’s Treaty of Amity and Cooperation အာဆီယံ ချစ်ကြည်ရေးနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးစာချုပ်ကို အမေရိကန်တို့ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တယ်။ တချိန်တည်းလိုလိုမှာပဲ အမေရိကန်ရဲ့ ဗမာဆိုင်ရာ မူဝါဒဟာ ချဉ်းကပ်မှုပေါ်လစီကို ပြောင်းလဲ ကျင့်သုံးတော့မယ်ဆိုတာ ကြေညာလာတယ်။ ဒါဟာ တရုတ်လွှမ်းမိုးပြီး အရေခွံခွာနေတဲ့ ဗမာနိုင်ငံကို သူတို့ပါဝင်ပြီး နွှာဖို့ ခြေလှမ်းပြင်လာတာလည်း ဖြစ်တယ်။ ဒီ့ထက် အရေးကြီးတဲ့ အချက်က အာရှကို သူတို့ ခြေဦးလှည့်တော့မယ်ဆိုရင် ဗမာကို စိုးမိုးထားဖို့ လိုတယ်ဆိုတဲ့ အချက်ပဲ။ ဗမာပြည်ဟာ ပထဝီ နိုင်ငံရေး အရ အရေးပါတဲ့ နိုင်ငံ တနိုင်ငံလို့ သူတို့ကိုယ်တိုင် သတ်မှတ်ထားတဲ့ အချက်ဖြစ်ပါတယ်။
အမေရိကန် သမ္မတ အဆက်ဆက်တို့ရဲ့ ပရောဟိတ်ဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ ဇဘစ်နူးဘာဇင်ဆကီ ဆိုသူက ပထဝီနိုင်ငံရေးအရ ယူရေးရှားကို စိုးမိုးနိုင်တဲ့သူဟာ ကမ္ဘာကို စိုးမိုးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ တွက်ချက် ဟောကိန်းထုတ်ပြခဲ့ဖူးတယ်။ (Zbignew Brzezinski ရဲ့ The Grand Chessboard စာအုပ်ကို ကြည့်ပါ။) အဲဒီတွက်ကိန်းနဲ့ အညီ ယူရေးရှားရဲ့ အသည်းနှလုံးဖြစ်တဲ့ အာဖဂန်နစ္စတန်ဟာ စစ်တလင်း ဖြစ်ခဲ့တယ်။ အာဖဂန်နစ္စတန်ဟာ အရှေ့အလယ်ပိုင်း၊ အာရှနဲ့ ဥရောပတို့ရဲ့ အဆက်အစပ် အသည်းနှလုံးမို့ အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်။
ဒါဆို ကျွန်တော်တို့ ဗမာပြည်ကရော။ ကမ္ဘာ့အရေးမှာ ပထဝီနိုင်ငံရေး အရ ဗမာဟာ အာဖဂန်နစ္စတန်လောက် အရေးမပါပေမဲ့ အာရှ အရေးမှာတော့ ဗမာဟာ အရေးပါဆုံး နိုင်ငံတနိုင်ငံပဲ။ ကျွန်တော်တို့ ဗမာပြည်ဟာ အရှေ့တောင်အာရှနဲ့ တောင်အာရှရဲ့ အဆက်အစပ် အသည်းနှလုံးဖြစ်တယ်။ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံကြီး နှစ်နိုင်ငံဖြစ်သလို အစဉ်အလာ ရန်ဘက်တွေဖြစ်ကြတဲ့ တရုတ်၊ အိန္ဒိယတို့နဲ့လည်း ဆက်စပ်နေတယ်။ ဒါ့အပြင် အရှေ့ အလယ်ပိုင်းက ရေနံကို တရုတ်တို့ ရယူနိုင်ဖို့အတွက် ရေနံကို ပင်လယ်ကနေသယ်ယူပြီး ပိုက်လိုင်းနဲ့ တဆင့်ခံသွယ်ယူနိုင်တဲ့ နေရာဟာလည်း ဗမာပြည်ဖြစ်တယ်။ ဒီလို သေနင်္ဂဗျူဟာ အရ အချက်အချာကျတဲ့ နေရာ အချက်အချာကျတဲ့ နိုင်ငံဟာ တရုတ်ရင်ခွင်မှာ ပျော်ပါးနေတာကို အန်ကယ်ဆမ် (US) က မနာလို မရှုစိမ့်တော့ဘူး။
ဒါ့ကြောင့် အမေရိကန်ဟာ ဗမာကို စိုးမိုးနိုင်ဖို့ သိပ်အရေးကြီးလာတယ်။ ဗမာကို အမေရိကန် စိုးမိုးနိုင်ရေးသည် ပဓာန၊ ဗမာပြည် ဒီမိုကရေစီ ရမရသည် သာမည ဖြစ်သွားတယ်။
ဒါ့ကြောင့် အမေရိကန် ထိပ်တန်း သံတမန်တွေ မြန်မာနိုင်ငံကို လာရောက်ပြီး အစိုးရနဲ့ ညှိနှိုင်းပြောဆိုခဲ့ကြသလို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ကိုလည်း သူတို့ မူဝါဒပြောင်းတော့မယ်ဆိုတာကို အချက်ပေး ပြောဆိုခဲ့တယ်။
ဘဲအုပ်က တရာ၊ နှစ်ရာ၊ မဗေဒါက တပင်တည်း
NLD ရဲ့ အကြပ်အတည်း
“မင်းတို့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ကို နှစ်ပေါင်းနှစ်ဆယ်ကျော် ငါတို့ ထောက်ခံခဲ့ပြီးပြီ။ မင်းတို့ အာဏာရအောင် မယူနိုင်ရင် ငါတို့ကတော့ ဆက်မစောင့်နိုင်တော့ဘူး။ ဗမာစစ်အစိုးရနဲ့ ပေါင်းရတော့မယ်၊ မင်းတို့လည်း ပေါင်းဖို့ ပြင်ပေတော့” လို့ အမေရိကန်က အချက်ပြလာတယ်။
တချိန်က တရုတ်နိုင်ငံဟာ ပြည်သူချင်းဆက်ဆံရေးကနေ အစိုးရချင်းဆက်ဆံရေး ပေါ်လစီကို ပြောင်းတုန်းကလည်း တရုတ်ဟာ ဗမာပြည်သူတွေကို မျက်ကွယ်ပြုပြီး၊ စစ်အစိုးရနဲ့ ပေါင်း၊ ဗမာပြည်က သယံဇာတတွေ စုပ်မြိုခဲ့ဖူးတယ်။ အခု အနောက်နိုင်ငံတွေ စီးပွားပျက်ကပ်ဆိုက် ၊ ပေါ်လစီပြောင်းတော့မယ်ဆိုတော့လည်း ဗမာပြည်သူတွေကို မျက်ကွယ်ပြုပြီး၊ စစ်အစိုးရနဲ့ ပေါင်း၊ ဗမာပြည်ကို ဂုတ်သွေးစုပ်မြိုဖို့ ပြင်လာပြန်တယ်။ တရုတ်ဟာ ဗမာပြည်သူတွေကို သစ္စာဖောက်ပြီး သူ့တိုင်းပြည် အကျိုးကို သူလုပ်ခဲ့ဖူးသလို၊ အမေရိကန်နဲ့ အနောက်နိုင်ငံတွေဟာလည်း အခု ဗမာပြည်သူတွေကို သစ္စာဖောက်ပြီး သူတို့ အကျိုး အတွက် သူတို့ လုပ်တော့မယ်။ ကဲ..ဒီတော့ အမျုိးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဘာလုပ်မလဲ။
အမျုိးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့ ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေဘောင်ထဲကို ဝင်ဖို့၊ ပါတီထောင်ဖို့၊ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖို့ အမေရိကန်က ဖိအားပေးလာတယ်။NLD ပါတီမထောင် ရွေးကောက်ပွဲ မဝင်ရင် NLD ကို ရာဇဝင်ထဲမှာ ထားရစ်ခဲ့ပြီး၊ အမေရိကန်၊ အနောက်နိုင်ငံ တွေနဲ့ စစ်အစိုးရတို့ ပူးပေါင်းကြတော့မယ်လို့ ဖိအားပေးလာတယ်။ အစိုးရဘက်ကိုလည်း NLD ကို သိက္ခာရှိရှိနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်နိုင်အောင် လမ်းဖွင့်ပေးဖို့ အမေရိကန်ပဲ ကြားဝင်ညှိနှိုင်းပေးခဲ့တယ်။ NLD နဲ့ စစ်အစိုးရကို အမေရိကန်တို့ အောင်သွယ်ပေးခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ NLD ကိုသာ အမေရိကန်တို့ ဖိအားပေးနိုင်ခဲ့ပြီး စစ်အစိုးရကိုတော့ အမေရိကန်တို့ ဖိအားမပေးနိုင်ခဲ့ဘူး။ အခွင့်အရေးပြပြီး မြူဆွယ် ဖျားယောင်းတာမျိုးလောက်ကိုပဲ အလွန်ဆုံးလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။
ဒါ့ကြောင့်လည်း နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေကို စစ်အစိုးရက ပြင်ပေး၊ ဖွင့်ပေးတဲ့ အခါ စိတ်မပါ လက်မပါနဲ့ ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက် ဆိုတဲ့အစား၊ လေးစားလိုက်နာလောက်ပဲ မပြောင်းချင်၊ ပြောင်းချင် ပြောင်းပေးခဲ့တယ်။ ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲမှာ မဝင်မနေရ ဆိုပြီး ထပ်ပြီးတောင် ကြပ်လိုက်သေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ NLD မှတ်ပုံတင်နိုင်အောင် ထောင်ကျနေတဲ့သူ ပါတီက ထုတ်ပေးရမယ် ဆိုတဲ့ စည်းကမ်းချက်ကိုတော့ ပြင်ပေးခဲ့တယ်။
အမေရိကန် စေ့စပ်ရေးကြောင့် ဗမာ့နိုင်ငံရေး ရွေ့သွားတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကောင်းတဲ့ အရွေ့ဖြစ်မလာဘူး။ ဘာ့ကြောင့်ဖြစ်မလာသလဲ ဆိုတော့ အမေရိကန်ရဲ့ စေ့စပ်ရေးဟာ မမျှတလို့။ စစ်အစိုးရကို ချော့ပြီး NLD ကို အကြပ်ကိုင်တဲ့ စေ့စပ်ရေးဖြစ်နေလို့ပဲ။
တဘက်မှာ NLD ပါတီရဲ့ နိုင်ငံရေး ရပ်တည်ချက်ကို ကြည့်ရအောင်။
NLD ဟာ ပြည်သူလူထုရဲ့ အားကို ဘယ်တုန်းကမှ လေးလေးနက်နက် မယုံကြည်ဘူး။ NLD ဟာ ၈၈ လူထုလှုပ်ရှားမှုကြီးကနေ ပေါက်ဖွား ပေါ်ထွက်လာတာမှန်ပေမဲ့ လူထုလှုပ်ရှားမှုကို မယုံကြည်ဘူး။ လူထုလှုပ်ရှားမှုကို ဘယ်တုန်းကမှ ဦးမဆောင်ဘူး။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုယ်တိုင်ဟာလည်း လူထုလှုပ်ရှားမှုထဲမှာ ဘယ်တုန်းကမှ တခါမှ မပါဝင်ခဲ့ဖူးဘူး။ ဒါတင်မက လူထုရှေ့ကနေ ဦးဆောင်ပြီး ချီတက်ဆန္ဒပြရဲပုံလည်း မရဘူး။ ( ၈၉ ခု ဇူလိုင် ၁၉ အဖြစ်အပျက်ကို ပြန်ကြည့်ပါ။) NLD နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစု ကြည် အားကိုးတာဟာ အနောက်နိုင်ငံတွေသာဖြစ်တယ်။ အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ ဖိအားသာဖြစ်တယ်။ အနောက်နိုင်ငံတွေက ပိတ်ဆို့ ပေးနေတဲ့ ဆန်ရှင်ကိုသာဖြစ်တယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ နိုင်ငံရေး သေနင်္ဂဗျူဟာ ဟာ မီဒီယာကို အသုံးပြုပြီး နိုင်ငံတကာဖိအား နဲ့ စစ်အစိုးရကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးသာဖြစ်တယ်။
ဒီတော့ သူအားကိုးတဲ့ အနောက်နိုင်ငံတွေဟာ သူ့ကို ပစ်ပြီး စစ်အစိုးရနဲ့ ပြန်ပေါင်းထုတ်တော့မယ်ဆိုတာ ရိပ်မိလာတဲ့အခါ ဒေါ်စုပြာသွားတယ်။ လူထုလှုပ်ရှားမှုကို မယုံကြည်တဲ့ ဒေါ်စုမှာ ဘာလုပ်လို့ ဘာကိုင်ရမှန်း မသိတော့ဘူး။ တခြားလုပ်တတ်တာလည်း မရှိတော့ဘူး။ ဒေါ်စု နိုင်ငံရေး သွေးဆုံးသွားတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ စစ်အစိုးရကို မချစ်သော်လည်း အောင့်ကာနမ်းရုံမှတပါး ဒေါ်စုမှာ တခြားလုပ်စရာ ဘာမှ မရှိတော့ဘူး။
ဒီလိုနဲ့ ၂၀၁၀ မှာ နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ရွေးကောက်ပွဲကို ပြတ်ပြတ်သားသား ဆန့်ကျင်ခဲ့တဲ့ NLD ဟာ အခုတော့ ဘာမဟုတ်တဲ့ ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲကို အောက်ကြေးနဲ့ ဝင်ဖို့ ပြင်လိုက်ရတယ်။ မောင်မောင်ခေါ်လို့ ဗျာမထူးခဲ့တဲ့ NLD ဟာ အောင်ကျော်ခေါ်တော့မှ ဘုရားထူးရပါတော့မယ်။
ဒါ့ကြောင့်လည်း အစိုးရ အဖွဲ့ဝင်မဟုတ်ဘဲ လွှတ်တော်နာယကသာဖြစ်တဲ့ ခင်အောင်မြင့်က စိတ်မပါလက်မပါ ၉၀ ရလဒ်ကို အသိအမှတ်ပြုပါတယ် တခွန်းပြောရုံလေးနဲ့ ဒါလောက်ဆိုရပါပြီ၊ ကျမတို့ ကျေနပ်ပါပြီဆိုပြီး ဒေါ်စုဟာ ပြာပြာသလဲနဲ့ ၉၀ ရလဒ်ကို စွန့်လွှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အနေနဲ့ ၉၀ ရလဒ်ကို ဘာ့ကြောင့် ဒီလောက် ဈေးပေါပေါနဲ့ ထုတ်ရောင်းလိုက်သလဲ။ ဘာ့ကြောင့် ဒီလောက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ ပစ္စည်းကို ဈေးမကိုင်ရဲ ဈေးမဆစ်ရဲသလဲ။ ရှင်းပါတယ်။ ဒေါ်စု သိပ်ဗိုက်နာနေလို့ပါ။ အမေရိကန် မရှိရင် ဘာမှ မလုပ်တတ်လို့ပါ။ ဒါ့ကြောင့်လည်း တနိုင်ငံလုံးလူထုက အပ်နှင်းထားတဲ့ သမိုင်းဝင် ၉၀ ရလဒ်ကို ပါတီတခုလုံး ရဲ့ သဘောထား၊ ပြည်သူလူထုရဲ့ သဘောထားကို တခွန်းတပါဒမှ မရယူပဲ ကိုယ်ပိုင် ပစ္စည်းကို လူပေးသလို ပေးပစ်ခဲ့တာပါ။ ဒီလိုနဲ့ တနိုင်ငံလုံး ပြည်သူတွေ ယုံကြည်ကိုးစား အပ်နှင်းခဲ့တဲ့ ၉၀ ရလဒ်ဟာ ထဘီဟောင်းတထည်ကို စွန့်ပစ်သလို စွန့်ပစ်တာခံခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီမိုကရေစီ အရေးလား၊ ကော်ပိုရေးရှင်းကြီးတွေ အရေးလား
နှစ်ပေါင်း နှစ်ဆယ်ကျော်ကြာအောင် ဗမာ့အရေးလှုပ်ရှားသူ၊ ဒီမိုကရေစီအရေး လှုပ်ရှား သူတွေကို ထောက်ပံ့ပြီး အမေရိကန်နဲ့ ဥရောပနိုင်ငံတွေက ရင်းနှီးမြုပ်နှံခဲ့ကြတယ်။ ဒီမိုကရေစီ အရေး လှုပ်ရှားသူဆိုသူတွေကို ခေါ်ပြီး အမေရိကန် ပုံစံ တွေးခေါ်ပုံ တွေးခေါ်နည်းကို သင်ပေးခဲ့တယ်။ အခုအမေရိကန်က ဗမာပြည်ကို ဝင်ပြီး စစ်အစိုးရနဲ့ ပြန်ပေါင်းထုတ်ချင်တဲ့ အချိန်မှာ ဗမာအသားအရေရှိပြီး အမေရိကန် ဥရောပ အတွေးအခေါ်ရှိတဲ့ အဲဒီလူတွေဟာ အသုံးဝင်လာတယ်။ အဲဒါကတော့ ဗဟုတွေပဲ။ သာမန်အားဖြင့် ဗမာစစ်အာဏာရှင်တွေဟာ ဘာမှ မဟုတ်တဲ့ ဗဟုလို ငမျောက်၊ ငခြောက်တွေကို အရေးလုပ်နေရိုး ထုံးစံမရှိဘူး။ စစ်အာဏာရှင်တွေဟာ နိုင်ငံခြားသားကို မုန်းလွန်းလို့ ဗိုလ်ခင်ညွန့်တောင် နိုင်ငံခြားသူနဲ့ လက်ထပ်ထားတဲ့သားကို အမွေပြတ်ကြေညာရဖူးတယ်။ အခု နိုင်ငံခြားသူတွေနဲ့ လက်ထပ်ထားသူတချို့ ပါဝင်တဲ့ ဗဟုတွေ ၊ တချိန်က သူတို့ကို ဆန့်ကျင်ခဲ့ဖူးတဲ့ အဲဒီဗဟုတွေကို သူတို့ အနေနဲ့ အရေးလုပ် စကားပြောနေတာဟာ အမေရိကန် မျက်နှာကြည့်ပြီး ပြောနေတာ ဖြစ်တယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ အနှစ်နှစ်ဆယ်မှာ အမေရိကန် ထောက်ခံမှုရခဲ့တဲ့ ဗဟုတွေကတော့ အမေရိကန်ကို ဒီမိုကရေစီ သူရဲကောင်းကြီးလို့  မှတ်ထင်ထားခဲ့ကြတယ်။ တကယ်တော့ အမေရိကန်တွေရဲ့ မပြောင်းမလဲတဲ့ တသမတ်တည်း ပေါ်လစီဟာ ဒီမိုကရေစီ မဟုတ်ဘူး၊ အရင်းရှင် ကော်ပိုရေးရှင်းကြီး တွေရဲ့ အကျိုးစီးပွားကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်တဲ့ ပေါ်လစီပါပဲ။ အမေရိကန် သမ္မတနဲ့ ဆီးနိတ်အမတ် တွေဆိုတာကလည်း အားလုံးဟာ အဲဒီ ကော်ပိုရေးရှင်းကြီးတွေမှာ အကြီးအကျယ် ရင်းနှီးမြုပ်နှံ ထားကြ သူတွေချည့်ပဲ။
ဒီမိုကရေစီရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အမေရိကန်ရဲ့ ပေါ်လစီကတော့ တသမတ်တည်း မဟုတ်ကြောင်း၊ အကြိမ်ကြိမ်အခါခါ ရှေ့နောက်မညီခဲ့တာတွေရှိကြောင်း သက်သေ အထောက်အထားတွေ အများအပြားရှိခဲ့တယ်။ အမေရိကန်ဟာ ကော်ပိုရေးရှင်းကြီးတွေရဲ့ အကျိုးစီးပွားနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ အခါ ဒီမိုကရေစီကို ထောက်ခံတယ်။ အဲဒီကော်ပိုရေးရှင်းကြီးတွေရဲ့ အကျိုးစီးပွားက အာဏာရှင်တွေနဲ့မှ ကိုက်ညီတဲ့ အခါမှာတော့ အာဏာရှင်တွေနဲ့ ပေါင်းလိုက်တာပဲ။ အဲသလို အထောက်အထားတွေ အများကြီးရှိခဲ့ ရှိနေတုန်းပဲ။ လယ်သမား အလုပ်သမား ငါးသိန်းကျော်ကို ကွန်မြူနစ်တံဆိပ်ကပ်ပြီး သတ်ခဲ့တဲ့ အာဏာရှင် ဆူဟာတို အစိုးရကို ကျောထောက်နောက်ခံပေးခဲ့တာဟာ အမေ ရိကန်ပဲ။ ဒီနေ့ ကမ္ဘာမှာ အဖောက်ပြန်ဆုံး အာဏာရှင်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ ဆော်ဒီအာရေဗျကို ထောက်ခံမှု အပြည့်ပေးနေတာ ဟာလည်း အမေရိကန်ပါပဲ။ ဆဒန်ဟူစိန်ကို တချိန်ကထောက်ခံခဲ့တာ၊ အီဂျစ် အာဏာရှင် ဟော်စနီ မူဘာရက်ကို အာရပ်နွေဦးမတိုင်ခင်အထိ တလျောက်လုံး ထောက်ပံ့ပေးနေခဲ့ တာလည်း အမေရိကန်ပဲ။ အတိတ်ကာလမှာ တာလီဘန်ကို ထောက်ပံ့ကူညီခဲ့တာလည်း အမေရိကန်ပဲ။ အယ်လ်ခိုင်းဒါး အဖွဲ့ကို မွေးထုတ် လေ့ကျင့် ပေးခဲ့တာလည်း တခြားမဟုတ်၊ အမေရိကန်ပါပဲ။
ဒီတော့ ယေဘုယျသဘောကို ပြောရရင် နိုင်ငံကြီးတွေဟာ သူတို့ အကျိုးရှိရင် ဘယ်သူမှ အာဏာရှင်နဲ့ ပေါင်းဖို့ ဝန်မလေးဘူး။ ဗမာပြည်သူတွေကို သစ္စာဖောက်ဖို့လည်း ဝန်လေးမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာပဲ။
အမေရိကန်ရော တရုတ်ရော နှစ်နိုင်ငံစလုံးဟာ ကမ္ဘာလှည့်ပြီး သူတို့ကိုယ်ကျိုးရှာကြတဲ့ အခါ ဘယ်သူမှ သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံက ပြည်သူတွေအကျိုးကို တချက်မှ ငဲ့ကွက်ကြည့်တာ မဟုတ်ဘူး။ အနောက်နိုင်ငံ ကော်ပိုရေးရှင်းကြီးတွေ ဖြစ်ကြတဲ့ ရှဲလ် က နိုက်ဂျီးရီးယားမှာ၊ ယူနီယံကာဘိုက်က အိန္ဒိယ ဘိုပါးလ်မှာ၊ တိုတယ်ဖီနာက ပြင်သစ်မှာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ဖျက်ဆီးမှုတွေဆိုတာကလည်း ကမ္ဘာကျော်ပဲ။ တရုတ်နိုင်ငံထဲက ကျောက်မီးသွေးတွင်းတွေရဲ့ အလုပ်သမားတွေ အပေါ် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုဆိုတာကလည်း ကမ္ဘာကျော်ပဲ။ ဒါပေမဲ့ အမေရိကန်က ပိုဆိုးတယ်။ အမေရိကန်ဟာ နိုင်ငံတကာကို လက်နက်နဲ့ ကျူးကျော်ဖျက်ဆီးခဲ့တာ မရေတွက်နိုင်လောက်အောင် များတယ်။ တရုတ်မှာ အဲသလို လက်နက်နဲ့ ကျူးကျော်တဲ့ လုပ်ရပ်မျိုး ဒီနေ့အထိ မရှိသေးဘူး။ ဒီနေရာမှာ တရုတ်က အမေရိကန်နဲ့ စာရင်တော်သေးတယ်။ (ဒါပေမဲ့ နောင်မှာ တရုတ်လည်း ဒါမျိုး ရှိမလာလို့တော့ အာမမခံနိုင်။ နောင်မှာ တရုတ်စစ်ရေးအင်အား ကြီးလာတဲ့ အခါ ဘာဖြစ်လာမယ်ဆိုတာ ကြိုမပြောနိုင်။)
အပိုင်း ၂ ကို ဆက်ဖတ်ပါ။
Posted by ကိုပေါ on Tuesday, April 10, 2012
စွန့်ပစ်ခံလာရသော နိုင်ငံရေးရိုးသားမှုနှင့် ချောင်ပိတ်ခံရသော မြန်မာပြည်
(ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပေါ်မှာ တင်ထားတဲ့ ကိုဝတုတ်ရေးသားတဲ့ ဆောင်းပါးကလေးကို မျှဝေလိုက်ပါတယ်။)
“စွန့်ပစ်ခံလာရသော နိုင်ငံရေးရိုးသားမှုနှင့် ချောင်ပိတ်ခံရသော မြန်မာပြည်”
ရေးသူ - Ko Watote
မြန်မာ့ နိုင်ငံရေး သမိုင်းမှာ တလွဲအသုံးခံရဆုံး ဝေါဟာရဟာ ပြည်သူလူထု ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရပဲ။ ဗိုလ်နေ၀င်း စစ်အုပ်စု အာဏာသိမ်းပြီးနောက် တတိုင်းပြည်လုံးမှာ ရှိတဲ့ အိမ်ဆိုင်၊ ကွမ်းယာဆိုင်ကစလို့ ရုပ်ရှင်ရုံ မကျန် သူတို့ မျက်စိကျတဲ့ ရှိရှိသမျှ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကို ပြည်သူပိုင် သိမ်းတယ်ဆိုပြီး လုပ်တယ်။ ပြည်သူပိုင် သိမ်းတယ်သာဆိုတယ်၊ ဗိုလ်နေ၀င်းတို့လူသိုက် နေ့ခင်းကြောင်တောင် အေးဓားပြတိုက်၊ ခိုးဆိုး လုယက်ပြီး ရလာတဲ့ တိုက်ရပါ၊ ခိုးရာပါတွေဟာ ပြည်သူလူထုလက်ထဲ မရောက်ပါဘူး၊ ပြည်သူပိုင် ဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူး။ ပြည်သူပိုင် သိမ်းတယ် ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရကို ကိုယ့်ကိုယ်ကျိုးကွက်ကွက်လေး အတွက်သာသုံးပြီး ဗိုလ်နေ၀င်းတို့ လူသိုက် တတိုင်းပြည်လုံးကို ကိုယ့်အမွေဆိုင်လို သဘောထားပြီး ကြမ်းချင်တိုင်းကြမ်း၊ ရမ်းချင်တိုင်း ရမ်းခဲ့တယ်။ သားသမီး၊ မြေးမြစ် မကျန် ဆယ်သက်စားမကုန်အောင် ရသမျှ အိပ်ထဲ သိမ်းကျုံးထည့်ခဲ့တယ်။ တဘက်မှာ ပြည်သူလူထုက ဆင်းရဲတွင်းနက်ပြီး ကျန်ခဲ့တယ်။
မဆလ ဗိုလ်နေ၀င်းရဲ့ စစ်အာဏာရှင် စနစ်ဆိုးအောက်ကနေ ကယ်တင်ပေးနိုင်မယ်လို့ ယုံပြီး တခဲနက် ထောက်ခံခဲ့ကြတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်ဟာလည်း မဆလတုန်းကလို ပြည်သူလူထုဆိုတဲ့ နံမယ်ကို အလွဲသုံးစား လုပ်တာတွေကို တွေ့လာနေရတာ တကယ့် ပြည်သူလူထု ဘက်က နာမိတယ်။ ခုပြောတာဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အကြောင်းမဲ့ စွပ်စွဲတာ မဟုတ်ဖူး။ ပြည်သူတွေဟာ ဗိုလ်နေ၀င်း စစ်အာဏာရှင် စနစ်ကို ဘယ်လောက် ရွံသလဲဆိုရင် မဆလ မျက်နှာဖုံးစွပ် စစ်အာဏာရှင်စနစ် ဆန့်ကျင်ရေး ရှစ်လေးလုံး လူထု အုံကြွမှုကြီးမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ပြည်သူလူထုက နေ့ချင်းညချင်း လူထု ခေါင်းဆောင်ဘွဲ့ အပ်နှင်းလိုက်တာကိုက သူတို့ဆီမှာ စစ်အာဏာရှင်လက်က လွတ်ချင်တဲ့ဆန္ဒ ဘယ်လောက် ပြင်းပြနေသလဲ ဆိုတာ အထင်အရှားပြနေတယ်။ ကိုးဆယ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဒီချုပ်ကို အပြတ် မဲထည့်ပြခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီချုပ်ကို ထောက်ခံမှုပြတာဟာ စစ်ပဒေသရာဇ်လက်အောက်မှာ မနေချင်ဘူးဆိုတာကို အထင်အရှား ပြသမှုသာ ဖြစ်တယ်။ စစ်အုပ်စု လက်အောက်ကလွတ်အောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကယ်တင်နိုင်မယ် ဆိုတဲ့ ယုံကြည်မျှာ်လင့်ချက်နဲ့ ကိုယ့်ကို ထောက်ခံခဲ့တာတွေ၊ အခုထိ အဲဒီမျှော်လင့်ချက်နဲ့ တခဲနက်ထောက်ခံနေကြတဲ့လူထုကို ကိုယ်ဘာ လုပ်လုပ် ဆက်ထောက်ခံမယ့်ပုံစံ ပြောဆို လုပ်ကိုင်လာနေတာကို တွေ့ရတဲ့ အတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆီမှာ နိုင်ငံရေး ရိုးသားမှု ကျန်ပါသေးရဲ့ လားဆိုတာ မေးခွန်း ထုတ်စရာ ဖြစ်လာနေပြီ။
ဒီလို ပြောရတာက ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်ခါနီး ကောက်လုပ်တဲ့ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က လွှတ်တော်ကို စွန့်ခွာဖို့ ဆန္ဒမရှိဘူး၊ ခြိမ်းခြောက်မှုတွေ ရှိပေမယ့် ရှေ့ ဆက်သွားဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားပြီးသား၊ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒါဟာ ပြည်သူတွေရဲ့ ဆန္ဒဖြစ်နေ လို့ပါပဲ ဆိုပြီး ပြောသွားလို့ပဲ။ ပြည်သူလူထုရဲ ဆန္ဒက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်စေချင်လို့ ၀င်ရတာဆိုတဲ့ သဘောမျိုးပြောသွားတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲကို ပြည်သူလူထု ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ ၀င်ခဲ့တာဆိုတာကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဘာအထောက် အထားနဲ့ ပြောသလဲ။ တကယ်တမ်း ဖြစ်ခဲ့တာက အန်အယ်ဒီ ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်ဖို့မ၀င်ဖို့ ဗဟန်းရုံးမှာ အစည်းအဝေးလုပ်ကြတော့ တိုင်းနဲ့ပြည်နယ် ကိုယ်စားလှယ် တချို့ က မ၀င်သင့်ကြောင်း တင်ပြဖို့ ပြင်ဆင်ထားပေမယ့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ခုဆွေးနွေးပွဲဟာ အငြင်းအခုံ လုပ်ဖို့ ဆွေးနွေးပွဲ မဟုတ်ဘူးလို့ ပိတ်ပြီးပြောထားတဲ့ အတွက် ဘယ်သူမှ ပြောခွင့်မသာခဲ့ဘူး။ သမ္မတသိန်းစိန် စစ်အုပ်စုနဲ့ သီးသန့်တွေ့လိုက်၊ အနောက်နိုင်ငံတွေက ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ တွေ့လိုက်လုပ်နေပေမယ့် ဒီတွေ့ဆုံမှုတွေမှာ ဘာတွေ ပြောဖြစ်သလဲဆိုတာ ခုချိန်ထိ ထုတ်မပြောသေးဘူး။ ကျမကို ယုံပါဆိုတဲ့ စကားတခွန်းနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ သူလုပ်ချင်ရာသူလုပ်၊ ပြီးရင် ပြည်သူလူထု လုပ်ခိုင်းလို့ လုပ်တာဆိုပြီး ပြည်သူ့ တံဆိပ်တုံးခပ်နေတယ်ဆိုရင် မဆလ ဗိုလ်နေ၀င်းရဲ့ ပြည်သူ့နံမယ်ကို အလွဲသုံးစား လုပ်နည်းနဲ့ ခုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောဆို လုပ်ကိုင်ပုံတွေ ဘာကွာသေးလဲလို့ မေးစရာ ဖြစ်လာနေပြီ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆီမှာ နိုင်ငံရေး ရိုးသားမှု ကျန်ပါသေးရဲ့ လားဆိုတာ မေးခွန်း ထုတ်စရာ ဖြစ်လာနေပြီ။
ရွေးကောက်ပွဲဝင်တာ ပြည်သူဖြစ်စေချင်လို့ ၀င်တယ်ဆိုရင် ကိုးဆယ်ရွေးကောက်ပွဲ ရလာဒ်ကို ကျောခိုင်းခဲ့တာကရော ပြည်သူဖြစ်စေ ချင်တာမို့ ကျောခိုင်းခဲ့တာလားဆိုတာ မေးပါရစေ။ ကိုးဆယ်ရွေေးကာက်ပွဲရလာဒ်ဟာ စစ်အုပ်စုရဲ့ အနိုင်ကျင့်မှု၊ ဖိနှိပ်မှုအောက်ကနေ ရုန်းထွက်ချင်တဲ့ တတိုင်းပြည်လုံးရဲ့ ဆန္ဒအစစ်အမှန်ပါ။ ဒါကို လက်ခံရင် ဒီကိုးဆယ် ရွေးကောက်ပွဲ ရလာဒ်ကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က သူ့ကိုယ်ပိုင် ပစ္စည်းပမာ သဘောထားတာဟာ ပြည်သူ့ဆန္ဒ၊ တတိုင်းပြည်လုံးရဲ့ဆန္ဒကို ကိုယ့်တသဘောထဲနဲ့ ကျောခိုင်းခဲ့တာက ပြည်သူ လူထုရဲ့ ဆန္ဒ အစစ်အမှန်ကို မျက်ကွယ်ပြုရာ ရောက်ပါတယ်။ အဲဒီလို ကျောခိုင်းခဲ့လို့ စီအာပီပီ အပါအ၀င် ကိုးဆယ်ရွေးကောက်ပွဲ ရလာဒ်ကို ဆုပ်ကိုင်ပြီး နိုင်ငံရေးသက်ဆက်နေရသူအားလုံး ပြိုကွဲလုနီးပါး ဖြစ်ခဲ့တယ်။ စစ်အာဏာရှင် လက်အောက်က လွတ်မြောက်ရေး လမ်းစလို့ ပြည်သူလူထုက မှန်မှန် ကန်ကန် မြင်တဲ့ ကိုးဆယ်ရွေးကောက်ပွဲ ရလာဒ်ဟာ ဗိုလ်သန်းရွှေ စစ်အုပ်စု အာဏာ တည်မြဲရေးမှာ အဓိက အဟန့်အတားပဲ။ စစ်အုပ်စုက ဒီ ရွေးကောက်ပွဲ ရလာဒ်ကို ပျက်စေချင်တယ်၊ အစအနတောင် မကျန် ခဲ့စေချင်ဘူး။ စစ်အုပ်စု ဖြစ်စေချင်သလို လုပ်ပေးတာ ကရော ပြည်သူလူထု ဆန္ဒပဲလား။
စစ်အုပ်စုရဲ့ မတရား အနိုင်ကျင့်မှုတွေကို ဥပဒေဘောင်ထဲက လုပ်နိုင်အောင် စီစဉ်ထားတဲ့ စစ်ကျွန်သက် ရှည်ရေး၂၀၀၈ အခြေခံ ဥပဒေကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဘယ်လို ပြင်မလဲဆိုတာ အရင်ကလည်း မေးခွန်း ထုတ်ခဲ့ပြီးပြီ။ ဒါပေမယ့် ဘယ်ပုံပြင်မယ် ဆိုတာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ခုထိ ကျကျနန ချမပြနိုင်သေးပါဘူး။ ဝေေ၀၀ါးဝါးတွေ ပြောနေတုန်းပဲ ရှိသေးတယ်။ ဒီလို ချမပြနိုင်သေး တာဟာ ဖွဲ့စည်းပုံကို လက်ရှိသွားနေတဲ့ ပုံစနဲ့ မပြင်နိုင်ဘူး ဆိုတာ သူသိလို့ ချမပြနိုင်တာလားဆိုပြီး မေးချင်ပါတယ်။ (ဟန်တင်အောင်ရဲ့ ’ဘာပြင်မှာ လဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်‘ ကိုပြန်ဖတ်ကြည့်ပါ။) ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ခုတမျိုး တော်ကြာတမျိုး အပြောအဆိုတွေကို မိတ်ဆွေတချို့ စုစည်းတင်ပြပေးထားတယ်။ (လက်လှမ်းမှီသလောက် Swe Swe Kyi နဲ့ Aung Naing Moe ဝေါကို ကြည့်ပါ။)
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရိုးသားမှုကို မေးခွန်းထုတ်စရာ အချက်တွေဟာ ရွေးကောက်ပွဲနားနီးလာချိန်၊ အထူးသဖြင့် ကာချုပ် မင်းအောင်လှိုင် တော်လှန်ရေးနေ့မိန့်ခွန်းပြောပြီးချိန်မှာ ပိုတွေ့လာရတယ်။ ၂၀၀၉ ဧပြီလ ၂၈/၂၉ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့နဲ့ ပြည်နယ် တိုင်းစည်း ကိုယ်စားလှယ်တွေ၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တွေ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတုန်းက ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံကို ပြင်သင့်တဲ့ အချက် ဆယ့်နှစ်ချက်ကို ပြောခဲ့ပြီး အဲဒိမှာ နံပါတ် သုံးအချက်က လွှတ်တော်မှာ စစ်တပ် နှစ်ဆယ့်ငါးရာခိုင်နှုန်းပါနေတာကို လက်မခံဘူး ဆိုတာကို ကြေညာချက် ထုတ်ပြောခဲ့သလို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ရုပ်မြင်သံကြားက လွှင့်တဲ့ မိန့်ခွန်းမှာလည်း ‘လက်ရှိ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေဟာ ဒီမိုကရေစီ စံနှုန်းတွေနဲ့ မကိုက်ညီတာကို တွေ့မြင်နေရပါတယ်၊ … အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေမှာ ပြင်ဆင် သင့်တဲ့ ပုဒ်မများကို ပြည်သူတွေကို အသိပေးပြီးဖြစ်ပါတယ်’ လို့ပြောသွားတယ်။ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို မ၀င်ခဲ့တုန်းက ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းကိစ္စ ဆွေးနွေးချင်ပေမယ့် စစ်တပ်က လက်မခံရုံမက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအ၀င် နိုင်ကျဉ်းတွေကို အဖွဲ့ချုပ်ကနေ ထုတ်ပယ်ရမယ်ဆိုတဲ့ အချက်တွေကြောင့် မ၀င်ခဲ့ဘူး။ နောက် ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်ဖို့ အကြောင်းပြတဲ့အခါကျတော့ လွှတ်တော်ထဲမှာ ပြင်ယူမယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်နဲ့ ၀င်တယ်။ ခုတခါ ကာချုပ်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ မိန့်ခွန်းအပြီးမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် ကောက်ကာငင်ကာ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲခေါ်ပြီး ‘၂၅ ရာခိုင်နှုန်းကို ဖယ်ထုတ်မယ်လို့ မပြောဘူး၊ ဖယ်ထုတ်တယ်ဆိုတဲ့ စကားကို ကျမ ဘယ်တုန်းကမှ မပြောပါဘူး၊ တပ်မတော်နဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်လို့ပဲ ပြောတာ’ လို့ ပြောလာပြန်တယ်။ လက်ရှိ ဖွဲ့စည်းပုံဟာ စစ်တပ် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းပါလို့ ဒီမိုကရေစီနဲ့မညီဘူးလို့ လက်ခံရင် ဒီမိုကရေစီနဲ့ညီအောင် ပြင်ဖို့ဆိုရင် စစ်တပ် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းကို ဖယ်ရှားရမယ် ဆိုတာကို လက်ကိုခံရမယ်။ ဖယ်ရမယ်ဆိုတဲ့ စကားလုံးကိုတော့ သုံးချင်မှ သုံးမယ်၊ ဒါပေမယ့် အနှစ်သာရက ဖယ်ရမယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပေါက်တာကို ဗမာစာဖတ်တတ်သူတိုင်း သိပါတယ်။ စစ်တပ်ကလည်း သိတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကာချုပ် မင်းအောင်လှိုင် မိန့်ခွန်းမှာ ဖွဲ့စည်းပုံကို ကာကွယ်ရမယ်လို့ ပြောလာတာဖြစ်တယ်။ နောက်တခါ လွှတ်တော်ထဲ ‘တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ်များ ပါဝင် ဆောင် ရွက်နေခြင်းဟာ အမျိုးသား နိုင်ငံရေး တာဝန် ထမ်းဆောင်နေခြင်းသာ‘ ဖြစ်တယ်လို့ ပြောတာကို ကြည့်ရင် စစ်တပ်ဟာ လွှတ်တော်ထဲမှာ ခပ်ကြာကြာနေမယ့် သဘောရှိတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောထားတဲ့ သူ မသေခင် ဒီမိုကရေစီ ရမယ့်သဘောပြောထားတဲ့ စကားဟာ မင်းအောင်လှိုင်စကားကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါ့မလားဆိုတာ စဉ်းစားစရာ ဖြစ်နေပြီ။ ကာချုပ်မိန့်ခွန်းကို လန့်သွားပုံရပြီး ဖာထေးတဲ့ အနေနဲ့ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်မယ် ဆိုတဲ့စကားကို ပြောင်းသုံးလာရပုံရတယ်။
ကြောက်ရွံခြင်းမှ ကင်းဝေးရေးတရားတွေကို စာတတန် ပေတတန်ရေးဖွဲ့ပြီး လူတွေကို မကြောက်တရားတွေ ဟောခဲ့တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် ကြောက်ရတာတွေ ရှိနေပြီ။ ဒါကို ကျနော်တို့ထက် စစ်အုပ်စုက ပိုတောင်မှ သိနေသလိုပဲ။ ခုရက်ပိုင်း စစ်အုပ်စု ကိုယ်စား လှယ်တွေ ပြောနေတဲ့ မိန့်ခွန်းတွေကို သေချာ ပြန်နားထောင်ကြည့်ပါ။ ကြံ့ဖွံ့ အတွင်းရေးမှုး ဌေးဦးက ‘ဒီနေ့ ကျနော်တို့ ပေါ်ပေါက်နေတဲ့ နိုင်ငံရေး ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှုပေါ့၊ သိပ်မြန်ဆန်တယ်။ မှန်ကန်တဲ့ လမ်းကြောင်းပေါ် ရောက်နေပြီနော်၊ နောက်ကြောင်းမပြန်ပါနဲ့ ဆိုပြီး ပြောနေတာတွေလည်း ရှိပါတယ်။ အဲဒိလို ရောက်လာအောင် ကျနော်တို့ ပါတီ လုပ်တာပဲ။ အောင်ဆန်းစုကြည် အခု ကျနော်တို့ ယုံတဲ့ လမ်းကြောင်းထဲရောက်လာတယ်ဆိုတာ ကျနော်တို့ ၀မ်းသာတာပေါ့’ လို့ပြောထားတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်ဟာ စစ်အုပ်စု ချပေးထားတဲ့ ခွင်ထဲမှာပဲ ကစားရတော့မယ်ဆိုတာကို အထက်စီးကလေသံနဲ့ တိုင်းသိ ပြည်သိ ကမ္ဘာသိ အသိပေးလိုက်တာပဲ။
အပေါ်မှာ ပြောခဲ့တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ရှေ့ နောက်မညီတဲ့ အပြောတွေဟာ တကယ်တော့ စစ်အုပ်စု ခွင်ထဲမှာ ကစားနေရခြင်း ရဲ့ တိုက်ရိုက် အကျိုးဆက်တွေပဲ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ လက်တွေ့ဘ၀ဟာ စစ်အုပ်စုကို တာဝန်ခံနေရတာဖြစ်ပြီး၊ စစ်အုပ်စု မကြိုက်တာ မလုပ်ရေး၊ မပြောရေး ဖြစ်နေပြီး လူထုအမြင်မှာတော့ ပြည်သူလူထုကို တာဝန်ခံထားရတဲ့ ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင်ပုံစံပေါက်အောင်၊ စစ်အစိုးရကို အလျှော့မပေးစတမ်းဆန့်ကျင်နေတဲ့ ခေါင်းဆောင်ပုံစံပေါက်အောင် ပြောနေရတဲ့အတွက် ခုလို ရှေ့ နောက်မညီမှုတွေကို တွေ့နေရတာဖြစ်တယ်။ ကိုယ့်လက်တွေ့ဘ၀ကို ပြည်သူလူထုကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဖွင့်ချ အသိမပေးမချင်း ဒီရှေ့ နောက်မညီမှုတွေကို ထပ်ထပ်ပြီး တွေ့လာရဖို့ပဲ ရှိတယ်။ လွှတ်တော်ထဲ ရောက်လာခဲ့ရင် ဒီရှေ့ နောက်မညီမှုတွေကို ပိုတောင်မှ တွေ့လာရစရာရှိတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ပြည်သူ့အင်အားကို အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ ဆန်ရှင်ပိတ်ဆို့မှုလောက် အယုံအကြည် မရှိတာဟာ သူ့အားနည်းချက်လို ဖြစ်နေတယ်။ ကျမကိုယုံပါဆိုတဲ့ စကားကို ပြောပြောနေမယ့် အစား ပြည်သူလူထုအားကို ယုံလိုက်ပါလို့ မေတ္တာ ရပ်ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ သူ့ရဲ့ စန်း၊ charisma ပဲခေါ်ခေါ် personality ပဲခေါ်ခေါ် အဲဒိစန်းကို ပြည်သူလူထု နေ့စဉ် ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ဒုက္ခတွေ၊ အခက်အခဲတွေကို ဖွင့်ချတဲ့နေရာမှာ သုံးပြီး ဒီနည်းနဲ့ စစ်အုပ်စုကို ရင်ဆိုင်သင့်ပါတယ်။ လယ်သိမ်းခံ လယ်သမားတွေ၊ အနိုင်ကျင့်ခံရတဲ့ အောက်ခြေက အလုပ်သမားတွေရှေ့ က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မားမားမတ်မတ် ရပ်ပြသင့်ပါတယ်။ စစ်အုပ်စု အဖြည့်ခံ ဘ၀ရောက်ရဖို့ အရေးကိုပဲ အဖျားအနာခံပြီး အားသွန်ခွန်စိုက် လုပ်နေတဲ့ဘက်မှာ ထပ်ပြီးအချိန်ဖြုန်းမနေသင့်တော့ပါ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပါတီစည်းရုံးရေး ရံပုံငွေတွေ ဘယ်ကလာသလဲဆိုတာကို ချပြသင့်တယ်။ လူထုခေါင်းဆောင်ဆိုတာ လူထုကိုပဲ တာဝန်ခံရမှာ ဖြစ်ပြီး ပါတီရံပုံငွေထည့်သူကို တာဝန်ခံစရာ မလိုပါ။ ပြည်သူလူထုက ကိုယ့်ကို ပေးထားတဲ့ မန်းဒိတ်ကို ခရိုနီတစု လက်ထဲမှာ အပေါင်ထားတာဟာ ကိုယ့်နဲ့ ကိုယ့်ပါတီအတွက် နိုင်ငံရေး အန္တရာယ် သိပ်ကြီးတယ်။
လက်ရှိ ပုံစံအတိုင်း သွားနေရင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ တချိန်မှာ နိုင်ငံရေး ထွက်ပေါက် လုံးဝ မရှိဘဲ ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ အထူးသဖြင့် သူ့ရဲ့ အဓိက bargaining chip ဖြစ်တဲ့ ဆန်ရှင်ကို အနောက်နိုင်ငံတွေက ရုပ်သွားပြီဆိုရင် လူထုအားကိုလည်း ပစ်ပယ်ထားပြီ၊ လူထု အားကလည်း တချိန်မှာကျဆင်းလာပြီ ဆိုရင် ကိုယ့်မှာ ဘာမှ ကျန်မှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လက်ရှိ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ အနေအထားကို ရိပ်မိသိရှိသူအားလုံး တိုင်းပြည်နဲ့ ပြည်သူလူထု မျက်နှာထောက်ပြီး ကိုယ့်စိုးရိမ်မှုတွေကို off the record ပြောနေကြမယ့် အစား လူသိရှင်ကြား သတိပေးသင့်ပါပြီ။ တည့်မတ်စရာရှိ တည့်မတ်ပေးသင့် ပါပြီ။ နောင်အချိန်နှောင်းမှ ပြောမယ် ဆိုရင် တာဝန် မဲ့ရာ ရောက်ပါလိမ့်မယ်။
(မှတ်ချက်၊ မတင်ခင် ၀ိုင်းဝန်းထောက်ပြ အကြံပေးခဲ့သူ မိတ်ဆွေအားလုံးကို ကျေးဇူးပါ။)
Posted by ကိုပေါ on Sunday, April 1, 2012
စွန့်ပစ်ခံလာရသော နိုင်ငံရေးရိုးသားမှုနှင့် ချောင်ပိ...